Ranomasina Thailandy " Journey-Assist - Ny fomba fijery feno amin'ny torapasik'i Thailand
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Torapasik'i Thailand
Kolontsaina, fomba amam-panao Thailandey, fialantsasatra ary filozofa
Fanofana fiara sy bisikileta + SDA
Koh Phangan (Phangan)
Ny morontsiraka any Thailand dia isan'ireo tombontsoa lehibe amin'ity fanjakana ity. Mampalahelo, ny fitsidihan'izy ireo dia midika faneriterena sasany.
Voalohany indrindra, tsy maintsy isainao ny vanim-potoana. Ny fotoana mety indrindra amin'ny fialantsasatra amoron-dranomasina eto amin'ity firenena ity dia ny Novambra sy ny ririnina rehetra. Raha tsy raisina io tranga io dia ahiana ny ho latsaka anaty toe-javatra sarotra.
Betsaka koa ny nosy Thailand (ohatra, Samui) no misy faritra lakandrano, noho io antony io, rehefa mifidy tora-pasika ianao dia tokony ho hitanao ny halalin'ny ranomasina akaikin'izany sy ny hamafin'ny rano.
Mampalahelo fa tsy ny faritra mpizaha tany amoron-tsiraka any Thailand no mirehareha fahadiovan'ny rano sy fasika, fa matetika izany dia araraotin'ny fahitan'ny toerana sy ny nosy izay mifanakaiky ny toe-javatra.
Tsara homarihina ihany koa fa elo sy seunger an'ny masoandro eny amoron-dranomasina Thai, amin'ny ankapobeny, dia aloa, afa-tsy ireo izay manana hotely kintana 5. Ny ankanavaka hafa dia i Phuket - tsy misy fitsangatsanganana masoandro fotsiny eny amoron-dranomasina any, izay noraran'ny governoran'ity faritany ity hamerina ny hatsaran-tarehy voajanahary amin'ilay nosy tena tsara.
Torapasika Phi Phi
Torapasika any Koh Ngai
Torapasika any Koh Lanta
Torapasika eo amin'ny nosy Koh Chang
Torapasika Koh Lan
Ny torapasikin'ny nosy Samet
Io no tora-pasika lehibe any avaratry Pattaya, antsoina koa hoe Naklya. Misy trano fandraisam-bahiny lafo be eo akaikin'i Wong Amat, ka izany no mahatonga ny fahadiovana tsy tapaka ao amoron-dranomasina ity. Saingy, ny ampahany iray amin'ny faritany dia somary madio kokoa noho ny hafa. Misy sisin-dalana akaikin'ny tora-pasika ity, maniry ny hazo palmie, fa tsy dia misy alokaloka be. Tena malalaka ny fantsom-pasika. Rehefa mandeha ny rano, dia mihena hatrany ny ranomasina ka lasa matevina be. Saingy, eo ivelan'ny tsio-drivotra, ny hidin-drivotra mankany anaty ranomasina.
Ny tanamasoandro, ny masirasira ary ny souvenir amin'ny Wong Amate dia azo alaina amin'ny habetsahan'ny ampy. Akaikin'ny tapany afovoan'i Pattaya misy trano fisotroana sy kafe. Aorian'izany dia misy vatolampy mavo. Ireo vato be sy ny faritra madio eo anelanelan'ireo vato ireo dia hita eo akaikiny. Manome fomba fijery mahafinaritra an'i Wong Amat izy io. Betsaka koa ny hazo. Raha mamadika ny cape dia azo atao ny mandeha an-tongotra eo amoron-dranomasina, mitsidika ny faritra misy morontsiraka milamina izay mifanakaiky amin'ny hotely lafo, indrindra fa ny Cape Dara. Ireo tranokala ireo dia mifanakaiky amin'ireo toby iray feno lamba feno fako sy vatam-borona afovoany. Na Wong Amat na cape etsy ambony dia manana rivotra sy onja mahery.
Ity dia tora-pasika kely izay hita ao amin'ny Cape Pratumnak. Manakaiky azy dia ny hotely mitovy anarana. Io tora-pasika io dia voahodidin'ny hantsana feno havoana, izay rakotra zavamaniry tropikaly. Mety ho eny am-tohatra ny miakatra, izay misy sidina maromaro. Sarotra ny mankany amin'io tora-pasika io tsy misy fitaterana olona, ​​raha tsy hoe mipetraka tsy lavitra eo ianao. Tsy misy ny fitateram-bahoaka eny akaiky eo. Mandeha an-tongotra tsy maintsy mamakivaky trano fandraisam-bahiny sy toerana fananganana ianao. Madio ihany ny rano eto.
Amin'ny faran'ny iray, Cozy Beach dia eo akaikin'ny hotely lehibe iray eo amin'ny havoana misy ny tamba-jotra Royal Cliff, ary eo amin'ny farany kosa dia vatofy iray voasaron'ny hazo, eo akaikin'ilay vato miparitaka vato. Eto, akaikin'ny fitsofana, dia misy orana mando any amin'ny ranomasina. Noho izany, ny milomano dia tokony ho eo afovoan'ny tora-pasika na akaikin'ny hotely. Ny halavan'ny Cozy dia 500 m, ny halavany dia 20 ka hatramin'ny 25 m. Ny ankamaroan'ny milomano eto dia ny vahiny ny hotely akaiky indrindra.
"Cabbages and Condoms" (Cafe sy condom) any amoron-dranomasina
Fitohizan-dranomasin'i Dongtan Beach izay mitohy fitohizan-dranomasin'ny Jomtien. Izy ireo dia maneho ny andalana lehibe iray, tsy misy fahatapahan-dàlana miharihary. Azo atao ny tonga eo amin'ny tora-pasika voatondro amin'ny alàlan'ny alàka fahadimy any Cape Pratumnak. Ny halavan'ny tora-pasika ity dia 500 m.Manakaiky ny ilany fahadimy, faritra lehibe midadasika izy io, tsy misy alokaloka voajanahary ary rakotra fasika madio, izay misy fandroana masoandro.
Rehefa avy nandalo ny ilany havanana ianao dia afaka mahita haingana ny kapoaka. Eo ihany koa ny gazebo. Tsy ity no faritra madio eto amin'ity torapasika ity. Mifindra amin'ny miankavia, azo jerena ny lalamby tsy misy fotaka izay misy lalana madio. Izany dia toerana tsara tarehy. Mavo ny fasika. Mihena ny fidirana amin'ny rano miaraka amin'ny havanana / mikoriana. Misy fotoana ifangaroan'ny rivotra eto.
Ao afovoany eto dia afaka mahita alàka misy hazo palmie ianao, lalana an-tongotra izay mihidy amin'ny fiara sy bisikileta, lalana, lakana fako, trano 2 miaraka amin'ny trano fidiovana. Somary mangina eto ihany. Avy amin'ny ilan'ny Pratumnak dia misy ny baoritra. Vitsy ny olona any, misy faritra lehibe tsy misy masoandro. Ary amin'ny lafiny Jomtien eo amoron-dàlana dia kafe tsara, ary ny fandroana masoandro ary ny seza fatorana. Betsaka ihany koa ireo mpitsabo tady miaraka amin'ny matadia ao anaty hazo rofia.
Dongtan no misy tsy lavitra an'i Jomtien, izay hanjakan'ny fahanginana sy ny fahatoniana, tsy misy ny lalana be mpandeha eo, mihidy ny fifamoivoizana amin'ny promenade. Dongtan dia be mpahalala be toy ny tira-pasika pelaka. Ny halavany dia 500 m. Na izany aza, afa-tsy ny bandy, afaka miala sasatra eto ny olon-drehetra. Tsy misy fanavakavahana ao Dongtan.
Tsy dia madio loatra fa mbola misy maro ihany koa. Ny eo akaikiny dia be arabe. Mpandeha taxi sy tuk-tuk be no mibaby azy. Amin'ity faritra ity, baza maro, kafe, dabilio, tranombarotra, fivarotana, ao anatin'izany ny 7-Eleven. Nalefa ny morontsiraka ny sambo, ny tompony izay miandry ny mpanjifany haka fitsangatsanganana rano. Ny mpivarotra isan-karazany dia mandeha manodidina ny faritanin'i Jomtien, izay manolotra ny zava-drehetra avy amin'ny voankazo voankazo ka hatramin'ny rubies. Matetika voaloto ny ranomasina.
Io torapasika io dia mahatratra 6 km. Azo lazaina hoe tanàna an-tanàn-dehibe izy io, satria ny fiandohan'ny Jomtien dia 2 km miala amin'ny faritra afovoan-tanàna. Tsy mitovy amin'ny torapasika hafa ao an-tanàna izany amin'ny fahadiovany tafahoatra, ny fihodinam-batana, ny sivilizasiona ary vitsy ny olona. Ity farany dia azo hazavaina amin'ny habeny lehibe.
Io tora-pasika io dia nahazo ny anarany avy amin'ny trano fisakafoanana ny anarana teo ihany. Ny trano fisakafoanana iray eo an-toerana dia antsoina hoe Glass House. Eto dia misy hotely lehibe Pinnacle Grand Jomtien. Ity ny latabatra kafe ao ambanin'ny kaonty, etsy an-daniny koa dia feno tanteraka izy, afaka hitondrana amoron'ny akorandriaka 20 metatra miala ny rano fotsiny ianao. Manaraka izany ny toerana kiter, satria ny volana febroary sy martsa dia matetika misy rivotra mahery.
Ity lava tora-pasika ity dia lava ary maharitra. Amin'ny ampahany dia entin'ny mpampita ny masoandro sy ny trano fisotroana kafe. Miaraka amin'i Ban Ampur dia mamelatra ahitra maintso rofia. Tena malalaka io tora-pasika io. Any amin'ny faran'ny lavitra dia maloto be. Na izany aza tsy misy olona ao. Mandritra ny vanim-potoana fizahan-tany, ny rano dia misy loko azure ary mangarahara. Ny fidirana amin'ny ranomasina dia lalina. Amin'ny fotoan'ny vanimpotoana, matetika dia misy rivotra, ahiana ny ranomasina. Amin'ny rano mafana dia lasa màla be izy io, ka tsy azo hilomano intsony, ary ny akorandriaka miaraka amina any anaty ranomasina dia atsipy amin'ny tany. Akaiky ity torapasika ity no hotely sy valan-javamaniry kely.
Ao ambadik'i Ban Ampur dia misy ny trano fandraisam-bahiny misy bungalows - Village Village sy ny ranomasina Pattaya Send Sun. Tany aolo, tsy misy foto-drafitrasa. Tsy hita intsony ny aloka. Manaraka kosa i Bang Saray. Eo akaikin'ny tanàna fanjonoana kely misy fisafidianana trano manofa trano no misy azy. Tsy dia misy onjan-drano eny amoron-tsiraka io, madio ny rano eto, ary malemy ny fidirana amin'ny rano. Ny tsy fatiantoka dia ny fisian'ny filam-baravarana any ambany any (mihatra amin'ny faran'ny tora-pasika) izany, noho ny fihoaran'ny ranomasina dia mahatonga ny fahalotoan'ny rano avy hatrany. Fa ny faritra afovoan'i Bang Saray dia madio be, misy ny felana palmie, fa tsy misy foto-drafitrasa ary tsy feno olona. Lalana iray manakaiky ny moron-dranomasina ary misy zaridaina misy sehatra filalaovana azy.
Lalana ao Sai Kaew "Beach military"
Eto ianao dia afaka mahita lalana madio, dabilio, bozaka, trano kely 2. Ny mpanofa masoandro sy ny fitaovana amin'ny tora-pasika hafa amina trano. Misy kafe manolotra sakafo Thai, ary fivarotana fanomezana. Mba hidirana amoron-dranomasina, dia ilaina ny andiana iray. Mba hanaovana izany, mila manome tahirin-kevitra izay manaporofo ny maha-ianao anao ianao. Ny vidin'ny fitsidihana an'i Sai Keo dia 100 baht.
Fantatra koa amin'ny hoe Blue Lagoon sy ny Beach miaramila. Toerana 20 km atsimo Pattaya. Io morontsiraka io dia nantsoina hoe tafika noho ny antony indraindray ny fanofanana ara-tafika no atao azy (fitrandrahana ny tany). Ary ny "Blue Lagoon" dia antsoina noho ny fisian'ny rano manga tsara tarehy. Amin'ity tora-pasika ity - fasika fotsy, ankafizin'ny mpizahatany maro maniry ny fialantsasatra mahafinaritra. Mety tsara ho an'ireo liana amin'ny torapasika tsy misy onja, satria raha misy onja, dia malemy izy.
Pie Plong. Morontsiraka Pai Plong (torapasika Centara Grand Beach Hotel)
Io amoron-dranomasina io dia misaraka amin'ny tora-pasika ao Ao Nang manodidina eo amin'ny hantsana iray izay misy ala. Lalana iray izay fantatra amin'ny anarana hoe Monkey Trail dia mandalo amin'ity vatolampy ity (noho ny habetsahan'ny gidro mipetraka amin'ity ala ity). Kely sy manokana ity tora-pasika ity, satria misy trano fandraisam-bahiny lafo vidy eto Centara. Araka izany, eto isika dia tena mifandraika amin'ny hotely iray izay misy tora-pasika io. Na dia manome izany aza ny lalàna ao Thailandy dia misy vahoaka ny tora-pasika rehetra.
Vitsy ny olona ao amin'ny Pai Plong. Vitsy ny olona maniry amin'ny tendrombohitra, vitsy ihany koa no mandeha amin'ny tora-pasika amin'ny sambo, afa-tsy amin'ireo vahiny trano fandraisam-bahiny. Ankoatra ny lalana mamakivaky ny tendrombohitra dia afaka mitety lakana ianao, izay alofana. Ny fialan-tsasatra izay tonga eo amin'ny Pai Plong eny an-dàlambe ala dia voarakitra ao anaty kahie iray nataon'ny mpiambina iray nipetraka tao anaty tranoheva. Voatonona tsara ity torapasika ity, koa madio tanteraka.
Tsy misy ny amboaram-panjakana, ny masoandro ary ny varotra sakafo. Manakaiky ny hotely dia misy kafe amoron-dranomasina izay anaovana ny zava-pisotro sy sakafo, fa ny vidiny be dia be raha ampitahaina amin'ny kafe iray any an-dohan'ny havoana iray akaiky. Maniry eo amoron-dranomasina ny hazo, fa tsy misy alokaloka amin'ny antoandro. Ny zavatra mahaliana amin'ity tora-pasika ity dia ny seron-tsangory, ary izay nentin'ireo vahiny ao amin'ny Centara Grand Beach. Ny fidirana amin'ny rano eto dia miankina betsaka amin'ny ebbs sy mikoriana fotsiny, izay nambara tamim-pahamalinana tokoa. Amin'ny rano mikoriana, mihena ny rano, mipetaka akaikin'ny morontsiraka. Amin'ny vanim-potoana tsy turista dia afaka mahita ny onja akaikin'ny tora-pasika ianao.
Ny sakan'ny tora-pasika dia lehibe tokoa ary miankina amin'ny ebbs sy mikoriana ihany koa. Fotsy - mavo, misy akorandriaka mifangaro. Mora azo avy ao Ao Nang izy io, ka izay no tora-pasika azo heverina ho safidy indray mandeha amin'ny Ao Nang Nang. Ny fandehanana amin'ny lalana Monkey Trail dia mety hahaliana, miaraka amin'ny fomba tsara tarehy avy eny amin'ny hantsana.
Ao Nang Beach Beach)
Ny tena amoron-dranomasina ao amin'ny trano fandraisam-bahiny ao Ao Nang, izay manana halavany somary lava be. Lalambe iray no mandeha eo, ary manaraka ny morontsiraka - ny embankment. Any afovoany, misy lalambe iray manatona ny moron-dranomasina, izay miorina amin'ny ranomasina. Miaraka amin'io lalana io sy ny promenade no anisan'ireo fotodrafitrasa ao amin'ny trano fandraisam-bahiny Ao Nang.
Raha tonga amin'ny ranomasina eo afovoan'ny tora-pasika ianao, avy eo, miankavia, miankavia, dia afaka tonga amin'ny vatolampy iray, eo am-pototry ny ony kely mikoriana amin'ny ranomasina. Hazo masiaka izay manalokaloka ao no itoerany. Eo ambonin'izy ireo no mipetraka ny masera be dia be miaraka amin'ny kidoro. Misy koa ny kafe amoron-dranomasina izay mivanginan'ny mpizahatany mandritra ny filentehan'ny masoandro. Ny afovoan-tora-pasika dia manda misy mivaingana, manomboka amin'ny promenade mankany amin'ny ranomasina dia ny tohatra no tanterahina. Akaikin'ny lalambe sy ny faritry ny rano dia misy kafe, fivarotana, hotely. Amin'ny ilany havanana, ny moron-dranomasina dia mijanona manohitra ny kafe, izay misy toeram-pandehanana. Manakaiky ny cape no manomboka ny faritry ny hotely Krabi Resort. Mivantana amin'ny tora-pasika dia hotely lehibe iray - Ao Nang Villa.
Ao an-dranomasina midadasika be i Ao Nang, izay amin'ny ankapobeny, dia miitatra be ihany koa. Ny fotoam-pizahan-tany, tony ny ranomasina akaikin'ny tora-pasika. Amin'ny fivondronana ambany dia mihetsika lavitra izy. Amin'ny vanim-potoana tsy hita, indraindray dia mahita ny onjan-drano ianao, manjary feno rahona ny rano. Ny fasika eto dia misy loko volondolo sy mavo, misy akorandriaka. Any amin'ny toerana ahitanao ireo valala avo namboarina tamin'ny akorandriaka. Ny hazo malemy sy ny hazo rofia dia alokaloka amin'ny saika iray manontolo amin'ny moron-dranomasina. Na izany aza, amin'ny antoandro, dia tsy misy alokaloka mivantana amin'ny tora-pasika any amin'ny toerana sasany.
Napetraka ao Ao Nang any anaty ranomasina ny sambo, ny tompony izay manao fitsangatsanganana amin'ny fialan-tsasatra amin'ny nosy mpifanolo-bodirindrina. Ity tora-pasika ity azo antsoina hoe be mpangoron-kanina, betsaka ny masseurs, hawkers, touting. Vitsy ny mpizahatany miteny rosianina.
Morontsiraka Noppharat Thara
Ity tora-pasika eo amin'ny ilany ity dia misaraka amin'ny ao Ao amin'ny havoana kely izay mihetsika mankany anaty ranomasina, fa amin'ny lafiny iray kosa dia voafetra amin'ny renirano mikoriana ao anaty ranomasina. Izay niraisan'i Nopparat Tara an'i Ao Nang, raha ny fotodrafitrasa, ny voalohany dia fitohizan'ny faharoa. Miaraka amin'ny promenade, izay mifanandrify amin'ny talenta amoron-dranomasina, misy ny fivarotana, kafe ary hotely. Ity ampahany ity dia azo antsoina hoe velona. Na izany aza, somary kely kokoa ny sivilizasiona. Manomboka eo ny ala mikitrona any anaty ranomasina. Ny fanginana dia manjaka eto.
Any amin'ny faran'ny morontsiraka, mankany amin'ny seranan-tsambo kely sy fiara fitateram-bahoaka ny lalana. Avy any ianao dia afaka mandeha mankany amin'ny iray amin'ireo nosy mpifanolo-bodirindrina miaraka amin'ny sambo na haka ny bisy mankany amin'ny Tanànan'i Krabi, na amin'ny alàlan'ny tuk-tuk mankany amin'ny fivahinianana ao Ao Nang. Na dia mora tohina an-tongotra aza ity farany. Saika ny trano fandraisam-bahiny iray ihany amin'ny Nopparat Tara Beach dia ny Holiday Inn.
Kely ny halalin'ny ranomasina akaikin'ity tora-pasika ity, amin'ny halavan'ny rano kely dia miha-lavitra ny rano, ka afaka miditra mora foana ianao any amin'ireo nosy be vato, izay zato metatra miala ny morontsiraka. Rakotra fonosy ny ambany, ary koa ny foza ary ny akorandriaka. Amin'ny fotoam-pizahan-tany, madio ny rano eto, tsy misy onjan-drano, sisa amin'ny fotoana nanonona ny ebbs indrindra. Amin'ny tondradrano avo dia mihena ny tora-pasika. Ny fasika eto dia misy loko mavo miaraka amin'ny loko volondavenona maivana. Misy ihany koa ny akorandriaka mifangaro. Mipetraka eo amoron-dranomasina no mahazo aina noho ny be dia be ny alokaloka. Betsaka ny hazo maniry eo anelanelan'ny lalana mihazakazaka manaraka ny morontsiraka Nopparat Tara sy ny fantsom-pasika.
Ny lafiny atsinanana, ity morona ity dia mifanakaiky amin'ny morontsirak'i Nopparat Tara, fa misaraka amin'ny renirano izy ireo. Ny trano fandraisam-bahiny ao amin'ny Pan Beach dia mametraka ny vahiny indrindra ao amin'ny tranom-borona. Ireto trano fandraisam-bahiny ireto dia miantso tsirairay: Pan Beach Bungalow, Sending Bungalow Beach, J2B Beach Bungalow.
Ao amin'ny Pan Beach avy any Nopparat Tara, afaka mandehandeha amin'ny rano ianao na mandeha amin'ny lalambe. Saingy, amin'ny tranga farany dia misy fihantonana lehibe. Pan Beach dia lava. Izy ity dia morontsiraka mitokana misy kafe kely vitsivitsy ary hotely vitsivitsy kokoa. Tena midadasika be, ny fasika dia misy ny mavo misy loko volondasy maivana. Betsaka ny akorandriaka kely sy ny valizy. Ampy ny alokaloka koa dia kely ny halalin'ny ranomasina. Etsy amoron'i Ban Beach, maro ny hazo maniry. Ny fanginana dia manjaka eto. Rehefa maraina sy hariva dia matetika tsy misy olona iray mihitsy. Any andrefany, ity tora-pasika ity no miafara amin'ny rano mandeha amin'ny ranomasina.
Ao Sieo Beach
Ity morona ity dia misy eo anelanelan'ny torapasika roa - Klong Muang sy Pan Beach. Raha ny fitsipika dia tsy azo heverina ho tena beach. Izy io dia amoron-dranomasina fasika, ary indraindray dia milomano ary saika hatraiza hatraiza hatra amin'ny masoandro. Tsy tian'ny masoandro ny masoandro, ary ny mpitsidika dia tsy mitsidika tora-pasika ity. Ny fasika eto dia marevaka sy henjana, misy vato marobe, vato lehibe azo jerena avy amin'ny sisin'ny tafika, ny haavony mety hahatratra ny lohalika. Misy toby fanjonoana ary misy tanàna midadasika be voahodidin'ny fefy iray, satria lalana mankany amin'ny tora-pasika azo atao afa-tsy amin'ny toerana 2, izay samy misy havoana mivaingana.
Raha tianao, amin'ny ora maraina dia afaka miditra amin'ny toby miaramila ianao, izay akaiky. Ao amin'ny faritaniny dia misy kafe kely ho an'ny miaramila. Ny olon-tsotra tsy tonga any aminy, na izany aza, amin'ny fotoana tsy hisian'ny mpitsidika dia mety atolotra ho an'ny menu ihany koa izy ireo. Na izany aza dia mety mangataka ihany koa ny hiala. Izany dia angamba miankina amin'ny fisian'ny manampahefana ambony indrindra ao amin'ny kafe amin'izao fotoana izao.
Ho an'ny fefy izay mamarana ny moron-dranomasina, dia tsy ilaina ny fiakarana. Ao Krabi, ao ambadiky ny toby miaramila no fonenan'ny mpanjaka, izay tsara kokoa ny tsy miditra. Ao amoron-dranomasina Ao Sieo dia mety aminao raha tsy tian'ny vahoaka ianao, ary koa ny lomano sy ny toerana anaovana hackneyed. Tsy mety amin'ny naturists, satria tsy dia fahita firy ny Thais, fa mbola ho tonga eto mandritra ny hanina sy fanangonana. Tian'izy ireo io tora-pasika io, satria na dia tsy tiana aza dia mirainga be dia be noho ny haben'ny alokaloka sy ny tsy fisian'ny mpizahatany.
Ao Kaw Kwang Beach
Ny anaran 'io tora-pasika io dia nifanandrify tamin' ny anaran 'ny nosy manodidina an'i Koh Kwan. Matetika anefa i Koh Kwan dia raisina ho fanohizana fotsiny ny fitohizan'ny Klong Muang Beach, ary tsy morontsiraka misaraka. Manatrika ny andrefana i Koh Kwan, izay tsara indrindra amin'ny fankasitrahana ny masoandro any. Mandritra ny rano mikarantsana dia azonao atao ny mandeha ao amin'ny nosy Koh Kwan. Rehefa mandeha amin'ny lalana mikitoantoana amin'ity nosy ity ianao dia afaka mahita lohasaha avy ao aoriana, izay aharihary ny masoandro mody.
Koh Kwan dia tsy dia ampy hilomano indrindra. Tsy ampy ny toerana mitokana, misy kafe marobe any amoron-tsiraka, be ny fantsona mitondra fako, ary misy renirano «mahitra» voajanahary. Rakotra fasika sy vato ny ambany. Ao amin'ny toerana izany dia madio, saingy misy faritra izay tsara kokoa tsy mandeha an-tongotra mandeha tongotra. Ny halaliny eto, ebbs kely sy misy dikany lehibe. Tsy ambany ny ambany, ka ny fidradradradra dia mitondra any amin'ireo toerana misy ranomasina, mifangaro amin'ireo nosy pasika. Ny fanoherana ny tora-pasika dia fantsom-bato eny ambanin'ny rano, izay misokatra amin'ny rano ambany. Ny foza hita no hita eo.
Ny fotodrafitrasa amin'ity torapasika ity dia saika tsy hita. Toeram-pivarotana sy baranjely mahazatra na baitaona maharitra 10 minitra miala avy eto, akaikin i Klong Muang. Ny trano fitehirizam-bolan'i Koh Kwan dia asehon'ny kafe akaikin'ny ranomasina sy ny hotely amin'ny lalana lehibe. Ny fahatongavanao eto mandritra ny iray andro dia azo atao na miaraka amin'ny kojakoja entiny ao amin'ny efitrano fitehirizam-bokatra amin'ny glove, na miaraka amin'ny vola tsy ampy lanja ao am-paosinao, izay ahafahanao misakafo hariva sy sakafo hariva ao amin'ny trano fisakafoanana akaikin'ny morontsiraka. Misaotra noho ny zava-misy, fiaraha-misakafo hariva mifankafalifaina eto dia misy mpifankatia eto.
Tub Beach Kaek
Any amin'ny faran'ny andrefan'ny faritany midadasika ao amin'ny faritany Krabi. Afaka tonga eto ianao amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny lalana izay mankany amin'ny zaridaina voajanahary kely. I Tub Kaek dia tery (mifandraika amin'ny torapasika any Krabi) fantsom-borona marefo, izay ahidradradradra ny kirihitra maitso. Amin'ny fihenan-drivotra kely, ny faritra ratsy toa ny tanimbolin'ny alarobia no mipoitra eto, fa ny tara kosa manova ny zava-drehetra - amin'ny fotoana toy izany dia manakaiky ny zava-maitso ny ranomasina ary mameno ny hazo. I Tab Kaek dia mitovitovy amin'i Koh Kwan, fa ny taloha kosa somary marefo sy madio kokoa. I Tab Kaek dia eo ambanin'ny haavon'ny làlan-dàlana lehibe satria ao amin'ity faritr'i andrefana ity no itomboan'ny fanampiana.
Akaikin'ny tora-pasika ity dia misy trano fandraisam-bahiny marobe izay manaka ny làlan-dranomasina ka miala ho an'ny olon-tsy fantatra afa-tsy ny fivoahana any amin'ny sisin'i Tub Kaek ihany. Ny fotodrafitrasa, ankoatra ireo hotely ireo, tsy misy eto. Mandeha amin'ny lalana mankany amin'ny zoro Phu Lei akaiky, ianao dia afaka miditra amin'ny tokana tokana eo akaikin'ny faritra indostrialy.
ReillyBeach (Railay Beach)
Ity angamba no tora-pasika malaza sy mahafinaritra indrindra. Krabi. Ny moron-dranomasin'i Reilly dia voahodidin'ny hantsam-bato avo avy any amin'ny tanibe, ka noho ny rano mankany amin'ny morontsirkirasy miaraka amin'ny havoana fotsy ary voahodidin'ny zavamaniry tropikaly maloto fotsiny ny mankany.
Railay West Beach (Railay Andrefana)
Krabi dia iray amin'ny faritany atsimo atsinanana amin'ny morontsiraka. Misy farihy emeraoda, rano mafana, 2 kianja nasionaly, torapasika. West Railay dia hita ao amin'ny ilany atsinanan'ny saikinosy Railay. Mirefy 700 m izy io ary rakotra fasika fotsy, aloky ny hazo tropikaly, hazavana mamelana ny ranomasina. Any afovoan'ny tora-pasika dia avy amin'ny lalana an-tongotra an-tongotra izay ahafahanao mankany amin'ny faran'ny Railay.
Io tora-pasika io azo antsoina hoe teknisianina. Tsy misy faritra amoron-dranomasina feno eto, afa-tsy ireo faritra roa any amin'ny ilany atsinanana. Ny sisa amin'ny faritany dia rano marivo, izay misy vato be sy ala honko. Anisan'ireo fakana ala honko mahita taimbo marobe mifangaro ao aminy. Ity tora-pasika ity dia ampiasaina ho an'ny mpandeha sambo mpanondrana sambo avy ao Ao Num Mao sy Krabi Town, ary koa ho an'ny fitaterana entana.
Beach Phu Ley (Phu Ley)
Raha ny tena izy, maro no mihevitra fa i Chaf Kaek sy Phu Lei dia torapasika tokana (izany hoe, Phu Lei dia heverina ho ampahany amin'ny Tab Kaek), saingy tsy marina tanteraka izany hevitra izany.
Ireo dia tora-pasika hafa samihafa izay nozarain'ny kafe. Ny faritanin'i Phu Leia dia misy faritra indostrialy izay voatahiry vato. Trano iray tsy hita maso izany, eo amin'ny sisiny havia izay tandindon'ny indostria. Ny sisiny havanan'ny Phu Lei, akaikin'ny sisin-taniny miaraka amin'i Tub Kaek, no mampiavaka ny fisian'ny sehatra lehibe iray, izay misy ny fitaovana, mifandraika amin'ireto vato ireto.
Amin'ny ankapobeny, Phu Lei dia torapasika maloto, kely ary be vato, eo akaikin'ny tanàna misy mpanjono izay manamboatra maloto eo akaikin'izy ireo.
Io amoron-dranomasina io dia hita ao amin'ny atsimo atsimon'i Krabi. Avy ao amin'ny zohy eo akaikin'ilay lava-bato tsy fantatra eo akaikin'ilay lava-bato ilay anarana, ka, nomena anarana araka ny andriambavy atao hoe Pra Nang. Nomen-dry zareo anarana hoe "ny lava-bato ny phallus ihany." Ny lazan'ny goa sy ny tora-pasika ity irery no tsy mahomby amin'ity toerana ity. Amin'ny lafiny hafa, Pra Nang dia azo antsoina hoe tora-pasika tsara indrindra eo amin'ny tanibe fonosin'i Chabi. Rakotra fasika tsara io torapasika io, misy volo matevina maro izay mamorona aloka, ary tendrombohitra mahafinaritra sy rano miloko tsara tarehy.
Io tora-pasika io no manavaka ny toerany mitokana. Azo atao na miditra any an-dranomasina na amin'ny lalana miafina, ka matetika misy olona kely foana eto. Ny ankabeazan'ny mpitsidika dia mpankafy, tia ny klimping (akondro), ny tsy fanta-daza ary ny mpitsabo yoga. Ny fotodrafitrasa sy ny toe-dranomasina no tsara indrindra. Tsy kely loatra ny fasika, misy ny vato ao ambany, fa tsy manelingelina ny mpitsidika izany.
Klong Muang Beach (Klong muang beach)
Io indray dia iray amoron-dranomasina tena malaza eo Krabi, rakotra fasika mavo malemy. Mivezivezy mandritra ny 2 km ny tora-pasika, noho izany dia tsy misy marefo eto. Raha te hanolotra ny tenanao amin'ny fiatoan'ny vahoaka ianao dia afaka mianatsimo any Krabi. Tsy misy eto ny fotodrafitrasa mahazatra ho an'ny tora-pasika, toy ny elo, ny masoandro ary ny mafana, fa io no tena mahasarika an'i Klong Muang ho an'ireo tia ny biby. Misy ebbs tena misy, miainga lavitra ny morontsiraka ny rano.
Ny iray amin'ireo morontsiraka tsara indrindra eran'i Thailand dia ny Maya Bay, izay eo akaiky eo. Phi Phi (46 km miala an'i Phuket). Eto ianao dia afaka mankafy ilay farihy tsara tarehy, izay voaro amin'ny hantsana telo amin'ny hantsam-bato misy haavo 100 metatra eo ho eo ny halaviran'i Maya Bay. Feno fasika fotsy mangatsiaka izy io. Madio be ny rano akaikin'ny morontsiraka. Ny sarimihetsika "The Beach" dia nalaina sary tao amin'ity paradisa ity. Misaotra azy fa nitombo be ny mpizahatany te hiala sasatra ao amin'ny Maya Bay. Ho an'ny fahafinaretana fara-tampony amin'ny fiderana ny tontolon'ny tany dia asaina manatona anao vao maraina na aorian'ny 200 hariva.
Havoana amin'ireo torapasika tsara tarehy indrindra any Thailand. Tsy misy ny alina izay misy, vitsy ny trano fandraisam-bahiny ary izy rehetra ireo no eo amin'ny laharana voalohany. Madio ny ranomasina, voarangotra fasika ny morontsiraka. Milamina aloha ity eto. Long Beach dia mamela anao hanadino ny sivilizasiona, fiara, vahoaka, haingam-pandeha haingana. Nisy ny onja avo nanomboka tamin'ny Mey ka hatramin'ny Oktobra.
Ity ny seranana lehibe (fa tsy ny irery) ao amin'ny Phi Phi Island. Tonsai dia morontsiraka tsara sy lava dia lava, fa ny antsasany fotsiny dia mety amin'ny filomanosana, mipaka hatrany amin'ny hantsana amin'ny sisiny ankavanana, raha miatrika ny ranomasina ianao. Ny afovoan-dranomasina dia teknika, misy sambo sy sambo maro. Longtails dia mijanona eo ankavia, misy vato maro. Noho izany, Tonsai dia torapasika fandinihina fa tsy lomano.
Io no morontsiraka lehibe faharoa amin'ny nosy. Phi Phi. Izy io dia tsy mitovy amin'ny an'i Tonsai lalina kokoa amin'ny halaliny lalindalina, satria io milomano io dia tsy azo atao raha tsy amin'ny fiakaran'ny rano. Tena tsara tarehy ity morontsiraka ity, manana fomba fijery mahafinaritra amin'ny sary nalaina avy teny amoron-dranomasina, ary koa avy amin'ny fomba fijery ao amin'ilay nosy. Phi Phi. Na izany aza, sarotra ny fiainana mangina eto - misy fety maro eny amoron-dranomasina, misy feo foana (ankoatry ny manodidina).
Lo ba kao
Ity tora-pasika miaraka amin'ny manodidina ity no misy any amin'ny tapany avaratra atsinanan'ny nosy Phi Phi ary iray amin'ireo lalana lavitra indrindra amin'ity nosy ity. Sarotra ny ho azo eto, fa ny ambiny eto dia tena tsara. Tena tsara tarehy io tora-pasika io, ahazoana aina miala voly, misy trano fisakafoanana marobe (ho an'ny nosy Phi Phi). Eo amin'ny lafiny ankavia, ahitanao ny ala matevina sy ny lemaky ny tanàna difotra, izay tsy tokony hanolorana azy io.
Lo Mo Di
Io tora-pasika io azo antsoina hoe masiaka. Akaiky kokoa noho ny tanàna Phi Phi izy io. Fitsidihana goavana nataon'ireo mpizahatany ho any Lo Mo Di dia mbola tsy voamarika. Tsy mora io fahazoana amoron-dranomasina io. Afaka mandeha an-tongotra ianao, fa amin'ny hafanana kosa dia tsy mahafinaritra izany safidy izany. Mbola mety ho tonga any an-tsambo ihany koa na dia somary lafo aza izany. Eto ianao dia afaka mankasitraka ny morontsiraka tsara tarehy, ny fasika amin'ny vatohara, ny felan'ny hazo palma.
Ao Hin Khom
Miaraka amin'ny habeny sy ny fifamatorany amin'ny trano fandraisam-bahiny manana anarana mitovy amin'izany, ity morontsiraka ity dia iray amin'ireo lehibe indrindra ao Phi Phi, satria fantatra sy be mpitia izy io. Tsy mahagaga izany - miafina amin'ny vatolampy sy ala mikitroka i Ao Hin Khom, misy toerana tsara. Maharatsy - sarotra ny hidirana ny morontsiraka, isaky ny mandeha ireo izay mandeha any Long Beach, noho izany antony izany dia mila mahay mandinika tsara ny zavatrao ianao na manafina azy ireo.
Van long bay
Helodrano izy io izay hita any amin'ny halalin'ny faritra be vato ao amin'ny Phi Phi Island. Noho izany, azo atao ny mankeny amoron-dranomasina raha tsy amin'ny ranomasina. Eo amoron'ny helodrano dia misy morontsiraka kely dia kely, izay azo afenina amin'ny fisondrotan'ny ranomasina. Any ambadiky ny morontsiraka dia afaka mahita ny tohin'ny lalantsara eo anelanelan'ny vatolampy ianao, saingy tsy misy manao fanazaran-tena milomano eto - amin'ny vondrona ihany, miaraka amin'ny sarontava snorkeling.
Tena misy gidro iray, efa zatra mpizahatany ary noho izany dia tena tsy menatra. Ireo biby ireo matetika manimba ny toe-piainana sy ny fialan-tsasatra. Amin'ny ankapobeny, izy ireo dia manakaiky tsy mitandrina, mangalatra ary miady irery mba hisakafo. Ankoatr'izay, tena be io torapasika io.
Tora-pasika tena lavitra, nefa tsara tarehy miaraka amin'ny lalina sy rano madio. Io no ahafahana milomano eto na dia amin'ny fisondrotan'ny ranomasina aza. Afaka mandeha eto ianao (izany dia azon'ireo mipetraka eo akaiky eo, na tena mamoy fo, ary koa ireo izay manana fotoana be dia be). Ny safidy mety indrindra dia ny milomano mankany Nui amin'ny alàlan'ny sambo, maka vombony sy sarontava, satria ity misy toerana tsara hanaovana snorkeling.
Ity no lavitra indrindra amin'ny sivilizasiôna, fa torapasika somary lehibe eo Phi Phi. Tonga amin'ny tanety izy io, saingy haingana kokoa noho ny ranomasina. Tsara tarehy eto, olona vitsivitsy, fotodrafitrasa tsara, misy seranana kely.
Taratasy iray mampisaraka an'i Nui Lana, saingy hafa be ireo torapasika ireo. Eo amoron-tsiraka ao Lana izao dia misy efa misy efitra efa tsy misy hitoerana intsony, ary ity tora-pasika ity mihitsy dia voaloto feno fako vokatry ny onja. Izy tsy mahazo aina.
Indray mandeha, Ranti Bay dia torapasika mangingina amoron-tsiraka any Phi Phi, saingy tena be olona sy malaza eo amin'ireo izay tia snorkeling. Malefaka morontsiraka io, misy vato be any ambany, ny fasika eto tsy tsara tarehy, fa amin'ny ankapobeny, ny morontsiraka dia afenina tsara ao anaty hano ary manana fotodrafitrasa kely azy. Avy amin'ny trano fandraisam-bahiny akaiky an'i Ranti Sunrise ny anarany, izay, na izany aza, dia tsy azo antsoina hoe tena hotely mihintsy.
Ity morona ity dia hita any amin'ny faran'ny morontsiraka avaratr'i Koh Samui. Manakaiky an'i Tong Plu, manomboka ny haavon'ny Nathon - tendrombohitra misy anao. Ny halaviran-dranomasina mankany amin'ny làlan-kavina dia 30 m. Misy kely mihoatra ny hotely 10 amin'ity sehatra ity. Tsy azo atao ny milomano eto - tsy misy ranomasina ny ranomasina, ambany ny vatany. Amin'ny ankapobeny, vitsy ny olona, ​​ary eo amin'ireo izay mbola tonga eto dia mpizahatany no saika tsy eo. Izany hoe, saika fialan-tsasatra avokoa no eto an-toerana. Ny fotodrafitrasa tsy dia novolavolaina. Ho an'ny miantsena dia tsy maintsy mila mankany Nathon ianao, izay 5 minitra miala eto. Namboarina kely ny faritany, saingy maro ny atrikasa eo akaikin'antoka amin'ny fanodinana artista ny vato sy ny hazo.
Ity tora-pasika ity dia azo antsoina hoe tora-pasika ao amin ny dikan ny teny hoe tokana aminny firehana ambany. Rehefa miverina ny ranomasina, misokatra ny ambany ambany, izay rakotra fasika fotsy tsara. Miala haingana. Ny rano amin'ny rano mangatsiatsiaka dia voatahiry ao anaty papdles. Eo afovoany dia misy nosy. Lavitra ny toerana lehibe indrindra misy eto amin'ny Nosy i Laem Yai. Tena tsy fahita firy ireo trano eo akaiky eo. Ny trano fandraisam-bahiny 3-4 ihany no akaiky. Ny fotodrafitrasa rehetra dia asiana plastika plastika sy bara reggae. Ny manodidina azy dia ala misy hazo rofia. Betsaka ny vato manana habe samihafa any amoron-dranomasina. Tsy misy ny hetsika amoron-dranomasina. Vitsy dia vitsy ny olona.
Io torapasika io dia toa ny tanànan'ny rano tondraka. Ny morona izay misy an'i Ka Ka dia manana endrika mivaingana tonga lafatra, mamorona fikambanana toy izany. Malemy eto ity. Amin'ny rano mihena, ny ranomasina dia miverina 400 m.Ny rano ambany dia mihena amin'ny vanim-potoana toy izany, afa-tsy ny fantsona izay natao ho an'ireo sambo. Misy ny hetsika amoron-dranomasina sy ny masoandro mody eto. Azonao atao mihitsy aza ny manakarama sambo ho an'ny fitsangatsanganana an-dranomasina fohy. Ny ankamaroan'ny mpanao vakansy amin'ny Pang Ka dia vahiny amin'ny trano fandraisam-bahiny.
Ity no tena perla amin'ny morontsiraka andrefan'i Samui. Samy hafa ny lafiny samy hafa ao Taling Ngama. Io morontsiraka io dia mamelatra amoron-tsiraka, ary misy vatobe ny sasany. Maloto ny ankamaroan'ity morontsiraka ity, mafana ny ranomasina, rakotra valiha ny farany. Ny tombony lehibe amin'ny moron-dranomasina dia masoandro milentika tsara tarehy ary ny fomba fijery ny Nosy Lima avy eto. Betsaka ny maro trano azo hofidina. Ny toeram-pivarotana dia omen'ny tranombarotra sy trano maloto. Ny lalana peratra dia lavitra be eto.
Anarana iray hafa ho an'ity tora-pasika ity dia i Tong Yang. Misy halavany lehibe ary misy fizarana 2. Any amin'ny morontsiraka andrefan'i Koh Samui no misy azy, akaikin'ny foibe fitantanana ny nosy - Nathon. Kely sy somary fotsy ny fasika eto. Ireo faritra madio dia mifandimby amin'ny fanariana. Ny ranomasina dia manana halaliny. Rakotra valiha ny ambany. Eny amoron-dranomasina dia misy hazo maro izay mamorona alokaloka. Lavitra ny lalana peratra. Betsaka ny magazay sy trano akaiky eo. Malalaka ny fivoaran'ny fotodrafitrasa, na dia misy iray amin'ireo bita tsara indrindra ao Samui, antsoina hoe Nikki Beach. Ny ankamaroan'ny fialan-tsasatry ny fianakaviana dia fahita eto, maro ny ankizy.
Ity morona ity dia hita ao amin'ny faritry ny foibem-pitantanan'i Samui. Ny tanàna Nathon dia tanàna iray feno marinas lehibe roa ary sambo maro samihafa misy azy ireo. Ny antsasaky ny moron-dranomasina dia voarakotra mivaingana ary trano goavam-be ho an'ny dia an-tongotra, ny antsasaky ny torapasika kosa misy moron-dranomasina. Ny tombony amin'ny Nathon dia fotodrafitrasa tsara, akaiky ny masoivoho goavambe sy ny ferry, rivo-piainana sy fandriampahalemana. Ny fatiantoka dia tsy afaka milomano eto noho ny halaliny sy ny fandotoana ny ranomasina. Ny Nathon dia mety amin'ny fakana sary amin'ny faran'ny ambany amin'ny rano ambany. Malalaka ny tranobe eto, indrindra fa ny tranon'ireo mponina eo an-toerana.
Io toerana io dia azo antsoina hoe amoron-dranomasina misy habe azo tsidihina. Ny Bang Makham dia hita any amin'ny ilany avaratry Samui, eo akaikin'ny lalana peratra. Saika ny antsasaky an'io lalana io dia manatona ny ranomasina amin'ny 5 m. Ny tora-pasika eto irery no miakatra fotsiny, rehefa misokatra ny farany ambany. Fotsy ny fasika. Na izany aza, feno vato, vatokely, poti-dranomasina, biby an-dranomasina. Ao amin'ny tapany atsinanan'ny Bang Makham dia misy faritra kely fasika eo akaikin'ny trano fandraisam-bahiny tokana. Ny faritra sisa dia tsy mety amin'ny milomano sy ny fiposahan'ny masoandro. Io tora-pasika io dia mety ho an'ny sary romantika misy bisikileta na fiara iray mifanohitra amin'ny tontolon'ny ranomasina ihany.
Ity morona ity dia hita any amin'ny tapany avaratr'i Koh Samui, ao amin'ny faritra be mponina sy be karazana. Noho ny fampandrosoana mivaingana amin'ny morontsiraka dia sarotra ny fidirana amin'ny rano. Indrindra fa misy ny trano fisotroana sy ny biraon'ny orinasa samihafa. Misy berths 2, bar, hotely. Tena tsara ny fandrosoana ny fotodrafitrasa. Betsaka ny hetsika amoron-dranomasina any amoron-dranomasina. Ny eo akaikiny no lalana peratra sy seranam-piaramanidina. Bang cancer dia miendrika U. Manana ranomasina lalina ny ranomasina eto. Eo amin'ny farany dia misy vatam-bato. Ny faritra afovoan-dranomasina anefa, dia lalina ny ranomasina. Indraindray ianao dia afaka mahita menaka manitra ao anaty rano sy fako mitsingevana. Amin'ny ririnina, ny onja dia mahatratra haavo lehibe, ary manjombona ny rano.
Milalao ny Laem
Ity tora-pasika ity dia hanintona ny olona rehetra izay tsy tia ny fialan-tsasatra amin'ny mahazatra amoron-dranomasina. Ny morontsiraka eto dia maro no misy azy. Play Laem no misy ny faritra avaratr'i Koh Samui. Indrindra fa misy trano fandraisam-bahiny, trano fandraisam-bahiny ary tranon'ny mpanjono. Eo am-posiny dia maro be sy bodo kely, hany ka tsy azo milomano intsony. Maloto ny morontsiraka, tsy manadio azy ireo, noho izany dia tsy malaza amin'ny mpizahatany ny tora-pasika. Ny hetsika amoron-dranomasina dia tsy misy fanao. Vitsy ny trano hofofaina. Tsy tsara tantana ny foto-drafitrasa, misy ny serivisy mahazatra ihany, toy ny fanofana fitaovana. Ny manodidina no tena manintona olona indrindra an'i Samui, ary koa ny seranam-piaramanidina.
Io morona io dia rakotry ny rindrin'ny trano fandraisam-bahiny tokana any amin'ny morontsiraka avaratr'i Koh Samui. Saingy, ny fidirana amoron-dranomasina dia tsy voafetran'ny mpiasan'ny hotely. Tsy misy zavatra mahaliana eto: ny halaliny dia malefaka, maro ny ahidrano sy vato. Tsy misy fialamboly, fitaovana amoron-dranomasina, ka manjary tsy misy te hahafanta-javatra fotsiny eto. Ny faritra dia voasaraky ny fotodrafitrasa tsizarizary, satria ity ampahany amin'ny Samui ity dia hita eo amin'ny fety.
Io torapasika io dia tsy mahaliana tanteraka. Noho ny halalin'ny halaliny, ny fidirana mora sy ny havana akaiky, mahasarika ny fianakaviana sisa i Tong Son. Tsy azo atao ambanin-javatra ny halalin'ny ranomasina eto, amin'ny toerana sasany amin'ny vanim-potoana maivana dia misy ny paddles. Ny fihetsehana amin'ny vato dia tokony ho marina araka izay azo atao. Ny vato maina dia mihetsiketsika mafy raha manitsaka azy amin'ny tongotra lena. Ny fidirana ny rano any amin'ny toerana sasany dia sarotra noho ny fisian'ny fika sy algae. Ao ambadiky ny fantsom-baravarana ankavanan'ny fidirana mankany Tong San dia akondro miafina izay ahafahanao mihosina tsy misy akanjo. Ambany ny haavon'ny trano eto, ambany be ny haavon'ny fampandrosoana fotodrafitrasa.
Ity no tora-pasika manokana an'ny Tong Soi Bai Hotel, fa ny fidirana amin'ny azy dia tena tsotra. Toa an'i Samrong, i Tong Soi dia manana ny endriky ny morontsiraka marefo. Ny ranomasina eto dia aseho amin'ny halalin'ny halaliny, izay tsy miova amin'ny fidradradradro. Ny fitsidihan'ny fahaleovantena mahaleo tena (tsy miankina amin'ny hotely) tsy dia misy dikany, satria ny vahiny hotely fotsiny no mahazo mampiasa elo, na izany aza dia tsy afaka miala voly eto raha tsy misy elo noho ny tsy fisian'ny alokaloka tanteraka. Ny sakan'ny tora-pasika dia misy lanjany - hatramin'ny 50 m. Fialamboly, mpivarotra ary foto-drafitrasa (afa-tsy amin'ny hotely).
Iray amin'ireo torapasika Samui izay tsara indrindra amin'ny fialantsasatra amin'ny fianakaviana (Ban Tai, Tong Son ary Mae Nam koa azo ianteherana amin'ity sokajy ity). Mivoatra tsara ny fotodrafitrasa eto fa tsy dia matevina kosa ireo tranobe manodidina azy. Misy trano fandraisam-bahiny 4 lehibe eo amoron-dranomasina, fa afaka mandeha any amin'ny ranomasina ianao amin'ny alàlan'ny lalana mijanona. Betsaka ny aloky ny voajanahary eto. Kely ny halalin'ny ranomasina, manana refy kely sy fehim-bolo ny fasika. Betsaka ny bara, trano amam-baravarana, kafe, hetsika amoron-dranomasina any amoron-dranomasina. Azo ampiasaina ny fanofa trano. Misy olona be dia be. Misy ny olana momba ny fiantsonana.
Ity no tsara indrindra azo hilomano, fa ny ampahany amin'i Chaweng. Miorina amin'ny avaratry ny tena Chaweng ary ahitana fizarana 2 - matevina sy lalina kokoa. Ny ranomasina dia tsy mety hilomano, eto afaka mandeha fotsiny ianao na maka sary. Ny fotodrafitrasa kosa, novolavolainy tsara. Betsaka ny hotely, hetsika amoron-dranomasina ary fitaovana amin'ny tora-pasika. Chaweng Yai dia be olona be, maro ny bara izay anangonana tanora mamo. Any amin'ny faravodilanitra dia fefy vato ny fiarovana, izay miaro amin'ny onjan-drano.
Ity moron-dranomasina ity dia any atsimon'i Chaweng tenany, izay maneho ny kopy kely amin'ity farany. Chaweng Noi mivelatra akaikin'ny lalana peratra. Ny faritra eo anelanelan'ny làlana sy ny ranomasina dia rakotra rindrina mandry hotely. Tsy afaka miditra amin'ny torapasika ianao amin'ny alàlan'ny faritany iray misy azy ireo ihany. Chaweng Noi madio sy milamina. Tsara ny halalin'ny ranomasina. Ny fidirana ho azy dia mety. Vitsy ny asa amoron-dranomasina. Ampy ny alokaloka dia ampy. Afaka miala sasatra ianao raha tsy mifandraika amin'ireo hotely ary tsy mandany vola be amin'ny fanofa seza seza. Chaweng Noi amin'ny toerana samihafa dia samy manana ny sakany, fa ny faravodilanitra tena tsara tarehy dia hita na aiza na aiza. Ny fotodrafitrasa rehetra eo an-toerana dia mifandraika amin'ny hotely, tsy misy trano fonenana ao amin'ny distrika.
Ity dia iray amin'ireo torapasika malaza indrindra ao Koh Samui. Ny fihetseham-po tsara aorian'ny fitsidihany dia mijanona amin'ireo ankamaroan'ireo izay mitsidika azy. Noho ny fahasarotan'ny fidirana dia maro no tsy afaka miditra eto saingy amin'ny vanim-potoana rehetra dia mbola misy olona maro eto. Na dia hita eny amoron-tsiraka aza ity tora-pasika ity ary rakotra fonenan-trano fandraisam-bahiny ihany koa, maro ireo tia ny fasika amin'ny haran-dranomasina sy ny rano azure no mbola tonga eto, mitondra ny entany sy ny elo. Tsy misy ny hetsika amoron-dranomasina, ny mpivarotra, ny tanora mirongo. Coral Cove dia aseho amin'ny fahadiovana, hatsaran-tarehy sy fomba fijery mahafinaritra. Any amin'ny faritra atsinanan'ny Nosy no misy azy io. Mafy ny halalin'ny ranomasina.
Io tora-pasika io azo antsoina hoe iray mahafinaritra indrindra amin'ireo morontsiraka kely any Koh Samui. Any anelanelan'i Lamai sy Chaweng no misy azy io, eo amin'ny hantsana mahafinaritra eo afovoan'ireo hantsana mivezivezy lehibe. Izy io dia misaraka amin'ny sisa amin'ny Nosy amin'ny hotely 3. Mamatotra azy ireo ny fotodrafitrasa iray eo an-toerana, tsy misy ny hetsika amoron-dranomasina sy ny fety tanora. Io tora-pasika io dia mety tsara amin'ny faritra tropikaly. Toerana mahafinaritra ity, malaza eo amin'ireo mpizahatany, ka maro foana ny azy ireo.
Ity moron-dranomasina ity dia misy ny avaratry ny Ranomasin'i Lamai, akaikin'ny hotely mewah. Tsy malefaka ny fananganana eto, saingy mafy orina ny vidin'ny fanofana trano. Na izany aza, misy ranomasina lalina ny ranomasina. Ny ambany no rakotra vatokely sy sileta. Tsy azo atao ny milomano eto fa betsaka ny mpizahatany mandeha am-pototry ny halavany hatramin'ny 500 m miala ny taniny. Ny fialan-tsasatra amin'ny ankizy dia mora. Misy alokaloka voajanahary ao amin'ny morontsiraka, vitsy ny olona, ​​tsy misy mamo ary tsy mpiray tanàna mifandraika amin'izany.
Izy io dia iray amin'ireo torapasika tsara indrindra sy mahaliana indrindra ao Koh Samui. Any amin'ny faritra atsinanana amin'ny nosy, akaikin'i Lamai. Ny ankamaroan'ny faritr'i Hua Thanon dia eo akaikin'ny tanànan'ireo mpanjono, izay antsoina koa hoe Hua Thanon. Betsaka ny sambo ary voaloto daholo ny zava-drehetra miaraka amin'ny fako fanjonoana. Ny trano hofa trano dia tsy lavitra ny morontsiraka ihany. Akaikin'i Hua Thanon no làlambe. Tena mivoatra tokoa ny fotodrafitrasa rehetra dia tsy maintsy hividy ny zava-drehetra amin'ny faritanin'i Lamai izy ireo. Kely ny halalin'ny ranomasina, eo amin'ny farany ambany dia miloko maro. Farafaharatsiny mety kely fotsiny ho an'ny milomano dia ampahany amoron-dranomasina izay hita eo anelanelan'ny vohitra voalaza etsy aloha.
Io tora-pasika io no be mpitia amin'ny surfers. Any amin'ny faritra atsinanana ao Koh Samui no misy azy. Fahitana amin'ny halaliny kely. Ny ranomasina eto dia tsy mety hilomano, amin'ny fotoana malefaka mamela ny halavam-potoana 300 m. Ao amin'ny faritany dia misy villa sy hotely manokana. Ny akaiky anao dia afaka mahita ny iray amin'ireo zavatra mahasarika indrindra amin'i Samui - zoo miaraka amin'ny tigra sy ny biby an-dranomasina. Ny fotodrafitrasa dia zara raha marimarina, tsy natao ho an'ny mpizahatany marobe. Tsy feno hipoka ilay tora-pasika. Tsy misy ny hetsika amoron-dranomasina.
Io tora-pasika io dia tsy azo atonina, kely fantatra ary tsy malaza amin'ny mpizaha tany. Tian'ny olona tia fialamboly irery ihany izy. Ao amin'ny faritra atsimo-atsinanana amin'ny nosy amin'ny faritra tsy dia ambany mponina. Akaiky dia maro ny hotely sy toerana fananganana. Lafo ny trano fandraisam-bahiny ary tsy avelany handeha eny amin'ny tora-pasika izy ireo amin'ny faritany. Tsy azo atao ambanin-javatra ny halalin'ny ranomasina, misy andriam-bato ny ambany.
Io morontsiraka io dia apetan'ny rindrin'ny hotely lehibe telo lehibe. Izy io dia manana ny fisehon'ilay tsipika miolakolaka amoron-tsiraka izay misy tora-pasika kely tsirairay izay misarona fasika, misaraka amin'ny vato lehibe miendrika boribory. Afaka mandeha amin'ny tora-pasika ianao irery amin'ny alàlan'ny faritry ny iray amin'ireo hotely, saingy tsy izy rehetra ireo no mandalo. Kely ny halalin'ny ranomasina, mety hilomano izy ireo. Tsy misy ny hetsika amoron-dranomasina, afa-tsy ireo izay atolotry ireo hotely mihitsy. Nathien dia tsy misy afa-tsy amin'ny fitsidihana iray mba hankafizin'ny morontsiraka mahafinaritra sy faravodilanitra. Ny faritra manodidina ny moron-dranomasina ity dia somary be mponina, ny foto-drafitrasa eto dia mahantra.
Io no ela indrindra amin'ny torapasika any atsimon'i Samui. Tena lavitra ny lalana peratra sy ny faritra be mponina any amin'ny Nosy izy io. Akaikin'i Bang Kao misy villa tsy miankina sy trano fandraisam-bahiny vitsivitsy. Somary kely ny trano hofofana. Ny ranomasina akaikin'ny tora-pasika dia tena matevina. Ho an'ny sambon'ny mpanjono dia misy lavaka fangalan-jaza, saingy saika tsy dia misy faritra mety milomano. Ny farany ambany dia voarakotra solosaina sy vatam-bato. Ny ankamaroan'ny tora-pasika dia misy amin'ny tsy firaharahiana sy ny fandotoana mafy.
Io tora-pasika io, sy ny morontsiraka hafa any atsimon'i Samui, dia manana minus lehibe iray ho an'ireo tia milomano any anaty ranomasina - lalina be. Amin'ny tondradrano ambany, ny ranomasina dia mijanona ho efa ho 500 m, ary mamelatra ny ambany ambanin'ny hazo matevina. Ny foibe akaiky ny fiainana mavitrika ao amin'ny nosy dia fiatoana ora iray eto. Tong Kruse dia tena lavitra be an'i Samui. Tsy hita tanteraka ny fotodrafitrasa, vitsy ny trano, fialan-tsasatra koa. Maloto, fasika ary maniry ny tora-pasika. Eto ianao dia afaka manofa sambo sy mpanamboatra sambo izay hitondra anao any amin'ireo nosikely atsimo akaikin'ny Samui.
Io koa dia somary lavitra be an'i Samui. Tsy be olona io, tsy misy trano, tsy misy foto-drafitrasa. Lavitra ny lalana peratra. Tong Tanot - ny any ivelan'i Samui. Ranomasina ny ranomasina, ao ambany no misy vato. Lehibe ny fasika. Ny tora-pasika dia mety ho an'ny olona tia ny rivotra iainana ihany.
Lehibe ity tora-pasika ity, ny halavany dia mihoatra ny 6 km. Izy io koa no foiben'ny faritra fizahantany eo an-toerana, izay misy ny trano fisakafoanana, hotely ary nightclap. Raha te hiala sasatra kokoa ianao ary mankasitraka tanteraka an'i Thailand, dia tsara kokoa ny mankany amin'ny avaratra amoron-dranomasina ity. Ary mba hampifangaro ny fiakaran'ny masoandro sy ny famonoana rivotra, dia tokony handeha any amin'ny atsimo atsinanana ianao. Ireo mpankafy dia mahafinaritra, scooter ary akondro dia te-hiaina ny afovoan'i Chaweng bebe kokoa.
Ny moron-dranomasina tsara tarehy indrindra any Samui, izay lava be ny halavany. Mahaliana i Lamai noho ny saturation ambany miaraka amin'ny fialan-tsasatra amin'ny fialan-tsasatra amin'ny fizahan-tany. Izy io koa dia manana toetra tsara tarehy sy fotodrafitrasa tsara. Betsaka ny habaka ao Lamai dia saika mandao. Na izany aza, misy faritra misaraka feno mpizahatany vahiny. Ny sasany amin'izy ireo dia liana amin'ny fiaraha-mientana amin'ny rano, fa ny hafa kosa dia aleony mandany fotoana amin'ny famonosan'ny masoandro eo ambanin'ny elo. Raha mila tora-pasika hiala voly miaraka amin'ny ankohonany manontolo, i Lamai dia safidy tena mety. Na izany aza, tsy tokony hitsidika izany ny olona amin'ny fararano, rehefa manjaka any Samui ny orana. Ny mpitsidika izay tonga any Thailand ho an'ny fizahantany ara-pananahana dia afaka mahita tovovavy ho azy ireo ao amin'ny iray amin'ireo bara mipetraka akaikin'ny morontsiraka Go-Go.
Ity tora-pasika ity dia mety ho an'ireo tsy tia an'i Mae Nam izay lalina sy feno olona. Tao Ban Avaratra no misy ny tanànan'i Koh Samui, akaikin'i Mae Nam. Ny morontsiraka dia tena amboarina, safidy maro amin'ny trano no atolotra ho an'ny hofan-trano, fotodrafitrasa efa novolavolaina, lalana famaohana eo akaiky eo. Kely kokoa noho i Mae Nam io tora-pasika io, na dia feno fotaka aza ny ranomasina eo amboniny, feno fonosana ny ambany, akaikin'ny sisiny taorinan'ireo vato vato. Ho an'ny milomano dia mety tokoa ity tora-pasika ity, anisan'izany ny ankizy, saingy tsy dia tsara loatra izany. Tsy feno olona i Bang Po, tsy ampy firy ny hetsika amoron-dranomasina eto. Ny morona dia rakotra fasika mavo. Somary vitsy ny trano fisakafoanana etsy akaiky.
Ity tora-pasika ity dia manana anarana hafa - Mimosa. Io no anaran'ilay trano fandraisam-bahiny miaraka amin'ny trano fisakafoanana ao Ban Tai. Ny làlana amoron-dranomasina dia tsy feno hipoka ary manana fidirana tokana mankany amin'ny ranomasina fotsiny. Ny ankamaroan'ny morontsiraka dia feno goma. Betsaka ny vato lehibe any amin'ny tapany andrefan'ny Ban Tai. Betsaka ny alokaloka voajanahary. Ny ranomasina dia manana halaliny. Misy vitsy ny fotodrafitrasa ao amoron-dranomasina. Tsy misy fety mirongatra, mpivarotra amoron-dranomasina, tanora mamo. Noho izany, ny tora-pasika dia mety ho an'ny fianakaviana.
Io no tora-pasika fahatelo amin'ny. Samui amin'ny lazany (ambany noho i Lamai sy Chaweng). Fianakaviana koa izy voalohany. Eto ambany dia tsara ny fisafidianana trano hofa, misy trano isaky ny teti-bola sy ny tsiro. Mivoatra tsara ny fotodrafitrasa fa tsy misy ny maka aina. Rehefa maty ny masoandro, dia matory ilay faritra, trano ihany no miasa. May dia saika feno rakotra hazo rofia i Nam Nam. Ny fasika eto dia malefaka, mavo, malefaka. Noho ny halaliny dia azo atao ny fandroana na dia amin'ny tsiranoka ambany aza. Vitsy ny mpivarotra eto, tsy misy ny toerana misy lanonana sy hetsika momba ny tora-pasika.
Ity no torolàlana tsy miankina amin'ny W-Retreat Koh Samui malaza. Manodidina ny $ 3 isan’andro eo ny vidin'ny efitrano mora indrindra. Misy ny fahadiovana, misy ny fampitaovana rehetra azo atokana ho an'ireo vahiny hotely. Ampy ny alokaloka amin'ny tora-pasika ary misy ny felana felana mitovy amin'ilay tamin'ny May Nam. Ny toerana manasongadinana eo an-toerana dia ny afon'ireo fasika, 000 m mipetaka amin'ny ranomasina ary mamela anao hamorona sary tsara. Ny onjan-drano mahery indraindray manimba azy, ka miteraka fihodinana. Na dia tsy miankina manokana aza ny tora-pasika sy an'ny vahiny, ny vahiny (tsy hotely hotely) no miditra amin'izany.
Ity tora-pasika ity dia hita any amin'ny tapany avaratr'i Koh Samui, akaikin'ny Mae Nam. Bo Phut mivelatra manaraka ny lalan'ny peratra, fa tena lavitra azy amin'izany. Ny faritany eo anelanelan'ny ranomasina sy ity lalana ity dia namboarina miaraka amin'ny hotely, azonao atao ny miditra ao amin'ny tora-pasika amin'ny alàlan'ny faritry ny hotely na amin'ny alàlan'ny embankment Fisherman Village ihany. Manana fotodrafitrasa tsara ny tora-pasika. Izy io dia be noho io. Ny akaiky ny tsena lehibe Big Sea sy Macro. Bo Phut dia mahasarika ary ahitana faritra marefo ao amin'ny faritra andrefana, ivontoerana voahazona tsara ary lemaka atsinanana.
Aleo mitsidika an'ity torapasika ity mandritra ny toetr'andro tsara. Ny anarany hafa dia Haad Sikantang. Eto, ny ala honko dia maniry eo amoron'ny morontsiraka iray manontolo. Mamela anao hiafina amin'ny taratry ny masoandro sy ny mason-dry zareo izy, na hiala sasatra tsara ao anaty fihinanam-bilona. Amin'ny ranomasina avo dia saika tototry ny rano tanteraka io morontsiraka io. Mety amin'ny filomanosana izy io ary tena tsara tarehy. Toa bibidia kely io. Misy maromaro maromaro banga izay amboarina ankehitriny, ary bara tekno malaza be.
Ny ampahany lehibe amin'ny morontsiraka dia voatsangana miaraka amina bungalow tsotra indrindra, noforonina "teo amin'ny lohalika" tamin'ny zavatra rehetra natsipy avy tany an-dranomasina hatrany amin'ny morontsiraka. Tsy dia manintona loatra izany, saingy mbola mitsidika ny morontsiraka ny olona. Tonga eto ireo hippies savage sy ny olona reraky ny rano mafana. Eto ianao dia mahita trano fandraisam-bahiny roa, tetezana mahafinaritra eo amin'ny hantsam-bato ary ny masoandro mody mijery an'i Koh Samui.
Raha mba Rin Nye
Hita ao amin'ny faritra atsimon'i Koh Phangan. Faritra somary lava ilay izy, izay miankandrefana. Tsy misy fety feno filoham-pirenena malaza. Na izany aza, afaka mirehareha fotodrafitrasa efa nivoatra i Had Rin Rai, izay misy ny serivisy ho an'ny fialan-tsasatra sy ny fivarotana rojo, ary koa ny fisafidianana toeram-ponenana amin'ny ambaratonga isan-karazany, ny lalana avo, ny pier, ny fanofa trano. Ity tora-pasika ity dia mifandraika amin'ny fivarotana sy teknika noho ny fety, na dia eo aza ny hoe heverina ho toerana ho an'ny tanora sy fety i Koh Phangan.
Raha mba manana endrika fehin-kibo tery tery i Rin Rai nandritra ny rano avo. Amin'ny fotoana toy izany dia mihitsoka tanteraka amin'ny toerana daholo ny mpandeha an-tongotra manaraka ny ranomasina. Ireo trano fandraisam-bahiny izay hita eto dia miezaka miaro ny faritany amin'ny fitrandrahana, ka matetika dia mahita ny faritra amoron-dranomasina ianao, nopotehin'ny superstrukture vita tamin'ny vato sy mivaingana. Izany dia ahafahanao mamonjy ny morontsiraka, fa manimba tanteraka ny fisehoan'ny tora-pasika.
Ity no morontsiraka tsara indrindra ho an'izay rehetra mikasa ny hahita bebe kokoa, hilentika, ary hiaina amin'ny trano feno tena fa tsy trano fandraisam-bahiny. Ban Tai dia iray amin'ny morontsiraka lava indrindra any Ko Phangan miaraka amina fotodrafitrasa tsara ao anatin'izany ny hypermarket sy ny toeram-pitsaboana manerantany. Betsaka ny safidy trano lafo vidy. Ny moron-dranomasina dia mora hita indrindra mifandraika amin'ireo toerana lehibe: seranan-tsambo, fotodrafitrasa fizahan-tany ary fihaonan-dàlana. Ban Tai dia azo faritana ho morontsiraka antonony. Toa tsara izany, saingy tsy dia mety loatra ny milomano eto. Rehefa dinihina tokoa, dia tena marivo eto, maloto ny any ambany, be ny silt ao anaty rano. Betsaka koa ny tany efitra sy faritra tsy voaharo misy tahiry fako. Ny morontsiraka eto dia iray amin'ireo erôty voahosotra. Araka izany, Ban Tai dia lavitra ny morontsiraka tsara indrindra any Ko Pha Ngan.
Misy renirano mikoriana avy amin'ny ilany andrefan'ny tanànan'i Tong Sala, izay mampisaraka ny morontsiraka kelin'i Ao Nai Wok amin'ity fametrahana ity. Malalaka izy. Nisy laguna namboarina iray izay noforonina teto, izay noforonina vokatry ny fanitarana ny vavan'ny renirano, izay namboarina ho fanarenana sambo kely. Voretra potika no niforona teto, akaikin'ny morontsiraka. Ny valiny dia fandroahana iray, manana endrika L, ao amin'ny faran'ny izay nosy.
Ity rora ity dia manarona ampahany lehibe amin'ny morontsiraka amin'ny ranomasina, vokatr'izany dia mamorona rano madiodio milamina izay mety amin'ny ankizy mandeha. Ny morontsirak'i Ao Nai Vok dia bastion iray manontolo miaraka amin'ny manda, izay manimba ny fahitana ny morontsiraka. Eto, ny beton sy ny vato dia miaro ny morontsiraka amin'ny fikaohon-tany, saingy izany dia toa tsy mahasarika. Amin'ny ankapobeny, ny tora-pasika dia manan-danja kokoa noho ny tanjona fialamboly. Any akaikin'i Thong Sala no misy azy, tsara tarehy be ny masoandro mody eto, ary misy hotely maotina maromaro. Na izany aza, tsy mora ny milomano eto.
Ao Play Lam
Io tora-pasika io no nanolorana azy ireo izay liana amin'ny tena torolàlana miafina any Koh Phangan, izay azo antsoina koa hoe tsara tarehy. Ao Play Lam dia manavaka amin'ny toerany sy ny endriny. Any am-pototry ny tendrombohitra no misy azy, eo amoron'ny làlana lehibe eo amin'ny nosy, antony tsy hita azy ao. Noho izany, io torapasika io dia tsy hita mihitsy amin'ireo mpizahatany. Ny tongotra mitovy dia nitarika fa ny tora-pasika dia manana endrika fahatapahana tsipika miaraka amin'ny alàlan'ny fihenan'ny vatokely misy habe maro isan-karazany, ala honko ary faritra tsy misy fasika malemilemy, izay miafina amin'ny masony maso.
Ny tombony azo avy amin'ny Plai Lam dia ny akaiky an'i Thong Sala, ny fampiononana ary ny fitokanana. Ny endrika farany dia noho ny tsy fahafantaran'ny maro ny fisian'ity morontsiraka ity. Antony iray hafa ny safidy trano faran'izay kely any amoron-tsiraka. Izy io kosa dia vokatry ny zava-misy fa sarotra sy lafo ny fananganana eny an-tampon'ny tendrombohitra. Noho izany, ny fasika misy loko marevaka sy rano azure dia tsy mandeha irery afa-tsy amin'ireo mitady fatratra fitoniana. Rehefa milamina ny andro dia tena tsara tarehy. Ny fasika maivana ao ambanin'ny rano dia taratry ny taratry ny masoandro, manazava ny ranomasina ambany.
Ny fiantsoana ity toerana ity ho tora-pasika dia tsy azo atao raha tsy amin'ny fivoriambe. Ao Hin bay dia eo amoron'ny helodrano lehibe iray, nofidian'ny mpanjono. Ireo izay be dia be dia be matetika. Ny ampahany dia vokatry ny pitsopitson'ilay asa, saingy ny toe-tsain'ny mpanjono no tena betsaka. Ireo tanànan'ny jono ao Thailand dia miavaka amin'ny antontam-baravarana ampiasaina sy fako hafa, ary koa trondro izay tsy azo amidy. Ho fanampin'ny mpanjono dia misy orinasam-pifamoivoizana kely izay mampiasa ny sisiny havia amin'ny morontsiraka miaraka amin'ny seranan-tsambo ho an'ny tanjon'izy ireo manokana.
Ny fiafaran'ny havanan'i Ao Hin Kong dia azo iainana kokoa. Misy toerana mety hahagaga anao. Na izany aza, tsy ny morontsiraka rehetra no madio sy voadio tsara, tsy ny faritra rehetra aminy dia mety hilomano, matetika ny rano somary fotaka. Kely ihany koa ny habeny ary tsy ampy fotodrafitrasa. Noho izany, azontsika atao ny mieritreritra fa safidy mahery vaika izany manerana an'i Phangan. Toy izany koa no azo lazaina momba an'i Wok Tum, mifanila amin'ny Hin Kong eo amin'ny ilany havia. Wok Tum dia kinova fohy kokoa sy mihodinkodina kokoa an'i Hin Kong, izay ampiasain'ny mpizahatany ny sasany amin'ny patch, fa ny mpanjono no malalaka indrindra.
Ity morontsiraka ity dia iray amin'ireo nahazo ny solon'anarana hoe "tora-pasika miafina". Porofon'izany ny toerana miafina tsara mety hivadika toerana malaza be. Nanao ny asany ny fanatontoloana, koa ankehitriny i Haad Son dia be olona sy mitabataba, falifaly sy tanora tokoa.
Tsy sarotra ny mahita azy io ankehitriny (na dia tehezan-tany 2 fotsiny aza no mitondra an'ity morontsiraka ity) - amin'ny anaran'ny hotely na amin'ny bisikileta maro mijanona amoron-dalana. Eto ny bay dia miafina amin'ny ala sy ny tany tsy mitovy. Ny morontsiraka mihitsy dia tena fohy ary ankehitriny dia misy bungalow amin'ny andalana voalohany. Tsy lavitra eto dia misy toerana malaza toa an'i Ko Raham, izay misy bar sy hantsam-bato hitrangan'izay te hitsambikina anaty ranomasina, satria milamina eto. Eo ambanin'ireto vatolampy ireto dia matetika ireo olona manana sarontava no misitrika antsitrika.
Kely ny habeny amoron-dranomasina. Ny eo akaikiny ihany no trano fandraisam-bahiny, izay ihany no anton'ny fotodrafitrasa eo an-toerana amin'ny ankapobeny. Io toerana io dia tsy mbola be mponina, eny fa ny fidirana amin'i Haad Kruat dia mandalo amin'ny toerana tsy misy sy malalaka na misy lalana, nefa tsy misy trano.
Fohy sy ahazoana aina ity morontsiraka ity. Voatazona ny filaminana eto, vitsy ny olona, ​​ny ankamaroan'izy ireo dia vahiny ao amin'ny hotely mifanila. Ny farany ambany, ny rano sy ny fasika dia tsy manintona indrindra, fa misy morontsiraka mampatahotra kokoa ihany koa. Ny tombony lehibe ananan'i Haad Kruat dia ny fiainany manokana. Ity tora-pasika mitokana ity dia mety indrindra amin'ny fialan-tsasatra maharitra roa herinandro avy amin'ny sivilizasiôna raha manana bisikileta nohofana ianao hamoahana anao rehefa mila izany ianao.
Ao Hin Gum
Ity toerana ity dia azo antsoina hoe amoron-dranomasina fa tsy misy fepetra. Misy vatolampy malama eto tsy misy fasika sy hazo rofia. Misy ihany koa ny fidinana mety amin'ny rano - tohatra vita amin'ny beton misy arofanina. Saingy mampidi-doza ny fiakarana mivantana any an-dranomasina eto. Amin'ny fotoanan'ny fisondrotan'ny ranomasina dia azonao atao ny manandrana milomano amin'ny saron-tava amin'ny vato, mandeha snorkeling, fa amin'ny onja ambany dia tsy afaka misaintsaina sy misaintsaina fotsiny ianao.
Ity morontsiraka ity dia manana anarana faharoa Coconut Beach. Tsy mitovy amin'ny habe kely, fa tsara kalitao. Any amin'ny faran'ny làlambe Koh Phangan lehibe no misy azy, izay manaraka ny morontsiraka andrefan'ity nosy ity ary miafara amin'ireo havoana any amin'ny faritra avaratra. Ny morontsiraka dia eo am-pototry ny havoana somary mideza, ao ambadiky ny faritanin'ny hotely kely misy bungalow. Ity trano fandraisam-bahiny ity no hany fotodrafitrasa any Haad Khom ankoatry ny bar iray hafa izay mitondra fiara 3 minitra avaratra.
Haad Khom dia manavaka amin'ny hatsaram-panahy sy zavamaniry maro, hazo palmie ary alaala, tsara fasika, tsy mahazo aina hidirana any amin'ny ranomasina sy hantsana amin'ny sisiny. Fahadisoana iray hafa amin'ity tora-pasika ity dia miatrika ny avaratra, noho izay antony tsy ahafahanao mihaona amin'ny masoandro sy ny fiposahan'ny masoandro, fa koa ny alokaloka dia ampy foana. Haad Khom no tian'ny mpizahatany za-draharaha tonga talohan'izany na izay efa nianatra tondro.
Cove kely mitokana ny toerana misy ity morontsiraka ity. Tahaka ny fasika amoron-tsiraka 100 m ny halavany. Wai Nam dia morontsiraka mahafinaritra sy mitokana, na dia mampiavaka ireo toetra ireo aza ny morontsiraka atsinanana Koh Phangan. Raha ny hatsarana kosa dia azony atao ny mifaninana amin'ny rehetra. Izy io dia miavaka amin'ny morontsiraka hafa amin'ny habeny, olona ambany ary tsy be mpitia amin'ny Internet. Ity dia eo am-pelatanan'ny mpizahatany mitady filaminana sy filaminana. Indraindray ny fety misy ny tanora dia mivory, mifampiresaka, milalao ary mihaino mozika. Ny ankabeazan'ireo antoko ireo dia avy amin'i Haad Tiana sy Haad Yuan, izay misy antoko miorina ao amin'ny Eden Bar sy Gayse Bar.
Ity morontsiraka ity dia tranon'ny Guy's Bar - toerana fivavahana ary iray amin'ireo fomba fijery mahaliana indrindra any amin'ny faritra atsinanan'ny Phangan. Sarotra ny mandeha an-tanety any Haad Tian, ​​ary lafo ny rano amin'ny rano, noho io antony io dia manilika ny mpizahatany antonony ity tora-pasika ity, saingy tian'ireo tia ny fiainana "dia". Tsy dia tsara tarehy izy io, fa milamina ary tsy be olona eto.
Tong Sala no tanàna lehibe amin'ny seranan-tsambo. Phangan. Ary ao amin'ity tanàna ity no misy ny torapasiny. Na izany aza, azo antsoina hoe tora-pasika mihitsy fa tsy ara-dalàna. Ny fialantsasatra amoron-tsiraka miaraka amin'ny vongan-droa lehibe roa any amin'ny nosy, izay ivoahan'ny fifamoivoizana mavesatra dia sarotra tokoa. Ny Berths dia manaiky sambo miaraka amin'ireo mpizahatany maro.
Tsy misy toerana sy toerana mahaliana ao amin'ny tanànan'i Tong Sala. Izy no foibem-pitantanana sy varotra eto amin'ny nosy. Eto dia afaka mora hividy sakafo, akanjo, fifanakalozana fifanakalozana, hividy tapakila ferry ianao. Na dia izany aza, vitsy ny mandany ny fialantsasatra ao amin'ny torapasika eo an-toerana. Ny ampahany aminy dia voapetaka amin'ny mivaingana, ary ny lafiny iray hafa dia tsy manintona ho an'ny fialantsasatra amoron-dranomasina. Ny fisaraham-bazana solika amin'ny rano amam-pako sy ny fako any amoron-dranomasina no mahatonga ny tanimbary, raha tsy mahatsiravina, dia azo antoka fa tsy mahaliana. Tongava be morontsiraka ara-teknika i Tong Sala, eto ianao afaka misaintsaina fotsiny, manisy vela, maka sary na miandry miandry ny fiampitana amin'ilay ferry. Ny torapasika Phangan misimisy kokoa na latsaka dia manomboka any amoron-tanànan'i Tong Sala.
Ny faritra sasany amin'ity morontsiraka ity dia samy manana ny anarany - Naked sy Zen, na izany aza, ireo no anarana eo an-toerana an'ny faritra amoron-dranomasina Sri Tanu, fa tsy morontsiraka tsirairay. Sri Tanu dia morontsiraka tena tsara, misy fasika madio, trano fandraisam-bahiny, trano fisakafoanana, fitoeran'ny masoandro miaraka amin'ny elo, cocktails. Ny tsipika voalohany dia feno olona tsy tapaka. Zen dia mety amin'ny fihaonana amin'ny namana sy fialan-tsasatra miala sasatra. Ny miboridana dia toa bibidia, miaraka amin'ny olona vitsivitsy, trano fisakafoanana ary hotely, saingy fahanginana sy zavamaniry be eny amoron-drano. Ka eo amin'ny morontsirak'i Sri Tanu dia afaka mahita toerana tianao foana ianao.
Nahazo an'i Chao Pao
Ity tora-pasika ity azo antsoina hoe tsiambaratelo. Tsy mora izany raha tsy hahalala izany mialoha. Miafina avy any aoriana ny alan'ireo hazo rofia, tsy misy famantarana lehibe ho an'i Had Chao Pao, ary tsy misy famerenany akory momba ny tora-pasika.
Ny tsipika voalohany dia fonenan'ireo hotely, ny vahiny izay saika ny mpitsidika an'io morontsiraka io ihany. Noho ny tsy fahampian'ny olona, ​​ny fiadananan'ny tropikaly, ny ranomasina marivo sy tsara tarehy, ary koa ny biraon'ny piraty eo akaikin'ny vatolampy, dia misy atmosfera tena akaiky. Eto ianao dia afaka mankafy fasika madio, hazo palmie, fidirana fisaka mankany amin'ny ranomasina ary tsy fisian'ny vato. Azonao atao ny manatona an'ity torapasika ity na tsy fanahy iniana, na rehefa nandinika tsara ny sarintany.
Eto amin'ity torapasika ity, dia re matetika ny lahatenin'ny Rosiana. Rehefa dinihina tokoa, ny olona avy any USSR teo aloha dia tia miala voly amin'ny torapasika avo lenta, izay ao anatin'izany i Haad Yao. Haad Yao dia mampiavaka ny halavany lava, ny tsy fisian'ireo andramena maranitra, ny fahadiovana, ny fanadiovana ary ny fotodrafitrasa mandroso.
Ny ranomasina eto dia marivo, fa tena tsara tarehy, indrindra mandritra ny toetr'andro. Ny fitsaharana amin'ity morontsiraka ity dia mety ho an'ireo izay tsy mila fotodrafitrasa matotra, fa amin'ny ankapobeny dia misy ny zavatra rehetra ilainao, manomboka amin'ny alokaloka ka hatramin'ny cocktails. Afaka tonga toy ny masiaka ianao, maka ny tapisinao, mila mijery tsara fotsiny eo ambanin'ny tongotrao ianao. Raha mahita fantsona plastika manga avy amin'ny tranobe mankany amin'ny ranomasina ianao dia tokony hifidy toerana lavitra kokoa, tsara kokoa - any ambony.
Ity morontsiraka ity dia azo faritana ho kalitao antonony. Ny habeny, ny halaviran'ny sivilizasiôna ary ny haavon'ny fampandrosoana fotodrafitrasa dia tsy miavaka. Haad Salad dia eo am-pidirana amin'ny iray amin'ireo morontsiraka malaza indrindra any Phangan - Mae Haadu. Ny toerana dia ny sisiny avaratra andrefan'ny nosy. Haad Salad dia mitoetra eo amin'ny 500 m ny morontsiraka. Ny fotodrafitrasa dia misy hotely vitsivitsy manodidina fotsiny.
Ny mampiavaka ity tora-pasika ity dia somary mahazatra ho an'ny Koh Phangan: lalim-be matevina, loko maivana ary habe kely fasika, hazo palmie vitsy kely, fidirana madio eo amin'ny rano amin'ny afovoan-tora-pasika, izay ambany misy vato amorony, toerana feno olona. Izy ity dia amoron-dranomasina fanta-daza, izay tsy any an-an-tany. Tonga amin'ny Haad Salad ny olona ho an'ny fonenana maharitra sy fitsangatsanganana.
An'ny morontsiraka malaza sy be mpitsidika indrindra any Ko Pha Ngan. Malaza amin'ny mpizahatany. Ny tena mampiavaka an'i Mae Khalad dia ny mombamomba ny morontsiraka sy ilay nosy kely eo akaiky eo, izay misy ifandraisany amin'ity morontsiraka ity amin'ny alàlan'ny ritra anaty rano. Amin'ny marin-drano dia misokatra ity mandrora ity ary afaka mahita tontolo mahafinaritra miaraka amina làlana eo afovoan'ny ranomasina ireo mpiala sasatra. Na izany aza, ny fotodrafitrasa akaikin'ity moron-dranomasina ity dia mivelatra tsy mitovy amin'ny isan'ny olona ao aminy. Tsy misy afa-tsy hotely sy kafe vitsivitsy, ary koa fivarotana roa.
Phangan dia nosy misy torapasika tsy misy mponina, ny tsara indrindra dia Hat Kuat. Izy io dia fantatra amin'ny anarana hoe "Beach tavoahangy" ary any amin'ny faritra avaratry ny nosy no misy azy. Khat Kuat dia matetika foana. Azo atao ny mandeha any raha tsy amin'ny alàlan'ny taxi-be miainga ao amin'ny Chaloklum Bay.
Raha mba Rin Nok
Ity morona ity dia hita any atsimon'ny. Phangan. Nanjary nalaza eran'izao tontolo izao ho an'ireo fety faran'ny volana isany isam-bolana. Tena paradisa ity ho an'ny mpandray anjara. Ny mozika dia miely eran-tany mandritra ny alina. Betsaka koa ny trano fisotroana. Amin'ny fialantsasatra amin'ny besinimaro, ity torapasika ity dia lasa fitsangantsanganana mahazatra. Miditra amin'ny ranomasina eto dia malefaka kokoa. Miaro ny serivisy manokana ny fahadiovana.
Lipe dia nosy Thai any atsimon'ny ambiny. Ireo mpizahatany marobe dia tsy mahalala firy momba an'io, ireo mpivavaka irery no tonga eto. Maro amin'izy ireo no mahita azy io ilay perla an'ny Thailand iray manontolo, sy Sunrise Beach (izay antsoina hoe Hat Chao Lei amin'ny fiteny Thai) - ilay perila an'i Lipa. Ny morontsiraka tsara tarehy dia mivelatra amin'ny 2 km, tsara tarehy mahafatifaty izy amin'ny maraina, ka izany no nahatonga ny anarany.
Beach amin'ny Koh Ngai
Koh Ngai dia nosy akaikin'i Krabi, izay kely sy milamina. Misy trano fandraisam-bahiny avo lenta ihany any amorontsiraka. Ny morontsiraka amin'ity nosy ity dia mety indrindra ho an'ny fianakaviana manan-janaka. Ny fanambaniny mitsivalana moramora dia rakotra fasika, ary afaka jerena ny ala ambanin'ny rano amin'ny saron-tava akaikin'ny morontsiraka.
Ity no morontsiraka lava indrindra amin'ny nosy rehetra. Ko Lanta. Mpizahatany maro no mihevitra fa ity morontsiraka ity no tsara indrindra manerana ny nosy. Anarana iray hafa ho an'ny morontsiraka ny Pra E Beach. Misy fidirana mety amin'ny ranomasina, alokaloka voajanahary be dia be, mivoatra ny fotodrafitrasa, ny zavatra lehibe ao amin'ny nosy (toeram-pitsaboana, hypermarket ary bazaar) dia eo akaiky eo. Noho izany, Long Beach dia azo heverina ho manerantany. Izy io dia malaza amin'ny mpanao vakansy sy ny maharitra.
Io no morontsiraka fahatelo lehibe indrindra eto amin'ny nosy aorian'ny Long Beach sy Klong Dao. Ny tombony azony dia misy fotodrafitrasa somary mandroso sy akaiky ny tanànan'i Saladan. Lava ity morontsiraka ity, saingy marivo, ary ny fidirana amin'ny rano dia sarotra amin'ny vato. Amin'ny rano iva, dia toa tsy mahasarika, na eo aza ny anarana faharoa tsara tarehy - Bali Beach.
Ity morontsiraka ity dia tsy dia malaza amin'ny mpizahatany, fa misy antony tokony hijerena azy io ho iray amin'ireo tsara indrindra any Ko Lanta. Eo koa ny fotodrafitrasa tena mandroso. Ny morontsiraka dia miorina amin'ny afovoan'ny morontsiraka Thai andrefana, eo anelanelan'ny avaratry ny avaratr'i Koh Lanta sy ny atsimo arovana. Tsy feno olona izy io, manana trano tsara safidy ary manana "piscine paddling" ho an'ny ankizy, noho izany dia mety amin'ny fialantsasatry ny fianakaviana.
Ity tora-pasika ity dia azo raisina ho toy ny zoro very amin'ny Long Beach, fa ity dia toerana mahafinaritra. Ny tonga eto anefa dia tena mahaliana ihany mandritra ny 1-2 andro, tsy misy intsony. Azo antoka fa io tora-pasika io dia tsy azo raisina ho toy ny toerana fijanonana mijanona ao Koh Lanta. Na dia malaza amin'ny mponina eo an-toerana aza dia mbola azo antsoina hoe masiaka ihany izy io, fa maloto foana.
Tena tsiambaratelo io morontsiraka io mandra-pisokafan'ny olon-drehetra ny fidirana mankao aminy (izay nandeha namaky faritra manokana). Ny morontsiraka eto dia tena simba noho ny asan'ny olombelona. Tsy misy toeram-pambolena manamorona ny morontsiraka iray manontolo, fa ny laharana voalohany kosa dia manamafy ny fambolen-kazo manokana. Lanta Secret dia morontsiraka mahafinaritra, mora ny milomano eto. Ankoatr'izay, mbola tsy dia be mpitia io ary mbola tsy vitsy ny olona ao.
Io tora-pasika io dia tsy dia ilaina loatra amin'ny lomano. Maro ny mpizahatany tonga eto haka sary tany fotsiny. Na izany aza, amin'ny andro sasany, trano bà kely iray Thai no akaiky.
Faritra tsara tarehy amoron-dranomasina izay misy amoron-drano tsara tarehy. Tsy mety amin'ny lomano izy io, tsy misy alokaloka voajanahary, ary avy amin'ny fotodrafitrasa dia misy hotely iray misy trano fisakafoanana eo akaikiny ihany. Ny mpiasan'ity hotely ity no nanamboatra kanonka volom-borona teny amoron-dranomasina izay miaro amin'ny tara-masoandro, ka tena mahazo aina miala sasatra any Nui.
Manana anarana faharoa - Votefall Beach, noho ny akaiky ny riandrano kely. Misy tanàna akaikin'ny morontsiraka. Ny fotodrafitrasa dia misy ny zavatra rehetra ilainao amin'ny fialantsasatra. Ny morontsiraka mihitsy dia toy ny morontsiraka fohy somary latsaky ny 1 km ny halavany. Misy alokaloka voajanahary be dia be, misy trano fandraisam-bahiny marobe manofa fandriana masoandro sy elo, ary ny afovoan'i Klong Chak ihany no mety milomano.
Iray amin'ireo torapasika tsara indrindra any Thailandy, izay any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Koh Lanta. Ny mpitsidika eto dia afaka miala sasatra amin'ny fahanginana tanteraka. Ny feon-dranomasina ihany no maheno. Mpivarotra, fiara, bisy tsy misy manimba no manimba ny ambiny any amin'ny zoro mitoka-monina toy izany.
Ireo izay te hiala voly sy hiara-dia amin'i Koh Lanta dia tokony handeha amoron-dranomasina mandritra ny antsasak'adiny hahatratra ny Klong Dao Beach. Io no morontsiraka malaza indrindra eto amin'ity nosy ity ary misy fotodrafitrasa efa novolavolaina tsara - misy hotely, trano fisakafoanana, fisotroana, trano fandraisam-bahiny, masoivoho fizahan-tany, banky, ATM, fivarotana, toerana fanofana bisikileta eo akaiky eo.
Klong Prao amin'ny Cho Lang
Morontsiraka afovoany amin'ny. Koh Chang - Klong Prao. Io koa no morontsiraka lava indrindra eto amin'ny nosy. Izy io dia azo raisina ho iray amin'ireo tsara tarehy indrindra eran'i Thailand. Klong Prao dia feno fasika malefaka ho an'ny vatana, rano madio sy hazo rofia izay nampidina ny rantsany tany anaty ranomasina, namela fahatsiarovana tsy hay hadinoina. Tsy misy lalana asfalta eo akaiky eo. Ity dia iray amin'ireo mampiavaka an'ity morontsiraka ity. Ny fitsaharana eto dia hahafahanao manadino ny fikoropahana isan'andro ary hiaraka amin'ny natiora. Ny tora-pasika dia voahodidin'ny tandavan-tendrombohitra.
Maro no mihevitra fa i Bang Niang no tena mandroso indrindra amin'ny resaka fotodrafitrasa rehetra amin'ireo moron-dranomasin'i Khao Lak. Ny eo akaikin'ity tora-pasika ity no tranombakoka tsunami. Bang Niang dia mamelatra ny morontsiraka ho lavitra lavitra noho i Nang Tong, amoron-dranomasina lehibe indrindra any Khao Lak. Na i Bang Niang aza dia ambany noho ity farany fa misy an'i McDonald akaikin'i Nang Tong, ary tsy akaikin'i Bang Niang. Na izany aza, ny kafe sy ny trano fandraisam-bahiny ao amin'ireo torapasika ireo dia mitovy ny mizara, ary eo akaikin'i Bang Niang dia mifantoka amin'ny faritra kely kokoa izy ireo, ka tsy mila mandeha lavitra. Tsy feno olona i Bang Niang na dia amin'ny fotoanan'ny orana aza.
Tena mety ny ho tonga amin'ity tora-pasika ity rehefa mipetraka amin'ny hotely iray ao Bang Niang na Nang Tong mba hisotro ronono ary miala sasatra amin'ny fandriam-pahalemana. Ny halaviran'ny sivilizasiona dia tsikaritra fa saika avy eo, taorian'ny niverin-dàlana avy any amin'ny lalana lehibe mankany an-tsaha. Taorian'ny nahatongavany amoron-tsiraka dia trano fandraisam-bahiny maromaro hita ary misy foto-drafitrasa mifandray akaiky amin'ireny hotely ireny. Na dia mijanona kilometatra maromaro aza ny tora-pasika, dia misy koa ny hotely vitsivitsy.
Nag Tong ao amin'i Khao Lak
Ity morontsiraka ity dia mety amin'ny fialan-tsasatra mitokana eo afovoan'ny toetra milamina sy tsy misy fotony. Tsy dia be mpitia sy be olona io, nefa koa misy mpankafy azy. Ny avaratry ny moron-dranomasina ity dia hankafizin'ny "olon-dozabe" izay tsy tia mipetraka amin'ny hotely. Ny faritra afovoany sy atsimo dia hisarika ireo manome lanja ny fampiononana. Voahodidin'ny hazo sy ahitra maintso i Nang Thong. Afaka miditra haingana any amin'ny ranomasina lalina ny mpandro, satria tsy misy fidirana malefaka. Amin'ny vanim-potoana manomboka amin'ny Mey ka hatramin'ny Oktobra, noho ny haavon'ny onja avo dia lasa tsy afaka milomano ao Khao Lak izy. Ny fialamboly feno dia omena eto manomboka ny volana novambra ka hatramin'ny aprily.
Amin'ny faran'ny amoron-dranomasina ity dia iray amin'ireo berères roa izay iantsorohany Fr. Koh Lan. Tsara tarehy io toerana io. Fotsy fasika be dia be no mifanakaiky amin'ny rano azure, toy ny ao amin'ny bokin'ny mpizahatany marevaka. Saingy, ny tsy fahampian-tsain'i Tavaen dia mitombo be izao ary mijanona eto amin'ity taona ity izy io. Ireo mpanamory masoandro dia mamorona andalana maromaro, manaraka ny sambo haingana izay mitondra, na miandry na haka mpandeha. Betsaka koa ny trano fisotroana, fivarotana mivarotra souvenir ary kojakoja amoron-dranomasina izay mamorona saika tsena iray akaikin'ny ranomasina. Azonao atao ihany koa ny mihaona mpizahatany be dia be avy any Shina. Tuk-tukery be dia be, manasa mpandeha, manaova feo tsy tapaka ny anaran'ny moron-dranomasina. Na dia midadasika be tokoa ny tora-pasika, dia maro ny olona eto, izay no antony mahatonga an'izany ao anaty rano ny fahatsapana fahenina.
Mety ho tonga an-tongotra avy amin'ny Tavaen Beach amin'ny lalana mivaingana izay manakaiky ny morontsiraka. Tokony handeha amin'ny faran'ny mifanohitra amin'ny havan'i Tavaen amin'ny piera ianao, avy eo mitodika any ambadiky ny kapoaka. Ny morontsiraka Tonglang dia mangingina ary milamina kokoa noho i Tavaen. Amin'ny vanim-potoana ambony dia misokatra eto ny trano fisotroana tsotra, misy ny manofa trano filokana sy elo, fa amin'ny volana hafa dia maimaika tanteraka ny tora-pasika. Manana fotsifotsy ny fasika, fa tsy vaventy, mazava be ny rano, fa ny fianana ao dia tsy malemy tahaka ny any Tavaen, ary ankoatra izany, ny vato maranitra dia mifanila akaikin'ny morontsiraka eo ambanin'ny rano. Any amin'ny faritra lehibe indrindra ao Tonglang, izay manatona an'i Tavaen, tsy misy vato ao anaty rano. Indraindray misy onja. Avy eny amoron-dranomasina, ny sambo mpizahatany haingana sy ferry dia mitsinkafona eo amin'ny lafiny roa. Betsaka ny sambo mandeha mijanona eo akaikin'ny tora-pasika ary miandry mpanjifa. Ny halavan'ny Tonglang dia kely, ary amin'ny lafiny iray, manalavitra ny fidirana, misy hazo roa manome aloky ny antoandro.
Fampahalalana milamina sy milamina ary somary be mponina. Kely bitika izy, voahodidina hantsana kely. Manakaiky ny sisin'ny hazo Tai Yai mitombo izay manome aloka. Ny midina any anaty rano dia malemy fanahy. Misy vato lehibe amin'ny rano, misy ny fahafahana mirotsaka amin'ny snorkeling ary ny fanaratoana aza. Amin'ny lafiny ankavanana, rehefa mijery ny ranomasina dia misy vatosoa lehibe. Indraindray misy onja. Misy fanofa-trano ao amin'ny loungers masoandro, sun loungers sy elo, misy magazay miasa. Raha mandeha mankany amoron-dranomasina, mila midina any amin'ilay havoana ianao, izay ahafahanao maka tuk-tuk avy amin'ny pieronao rehetra. Avy amin'ny tanàna akaiky indrindra an'i Na Baan dia azo hihoatra an-tongotra 20 minitra, tsy maintsy manakatra ny havoana ihany ianao.
Nual (Monkey Beach)
Maharitra io torapasika io fa somary mangina. Hazo lehibe maro no maniry eo, manome alokaloka ary mamorona tontolo mahafinaritra. Misy efitra fandraisam-bahiny amin'ny masoandro izay mahazo aina. Etsy amin'ny torapasik'i Koh Lana dia tsy misy. Misy vato ao ambanin'ny rano ary rehefa miakatra ny haavon'ny rano dia mihena ny fantsom-pasika eo alohan'ny talaky ny masoandro. Ao amin'ny tora-pasika dia misy trano fisakafoanana mahafinaritra miaraka amin'ny fanolorana Eoropeana, izay misy fandroana sy fidiovana. Io tora-pasika io dia nantsoina hoe gidro satria teo amin'ny havoana iray eo akaikin'ny vatolampy mena, eo amin'ny ankavia, rehefa mijery ny ranomasina ianao dia mahita gidro, izay manome fialan-tsasatra indraindray.
Ity no lava indrindra ary noho izany ny karazany isan-karazany amin'ny morontsiraka Hua Hin. Ny afovoan-tanànan'i City dia manakaiky ny afovoan'i Hua Hin, maro ny kafe sy fivarotana, trano fandraisam-bahiny miaraka amin'ny mpampianatra, ary misy koa ny sambo sy ny fanofaanana akondro. Ny fatiantoka dia ny tsy fahampian'ny zavamaniry amoron-dranomasina, izay tsy misy alokaloka voajanahary.
Any amin'ny tapany avaratra akaikin'ny morontsiraka dia misy vatosoa tsara tarehy, ao amoron-tsiraka dia misy karazana zavamaniry, eo akaikiny dia arovana nefa toeram-pivarotana malalaka sy toeram-pivarotana malalaka izay omena ireo souvenir sy ny tora-pasika omena. Io no avaratra amoron-dranomasina izay malaza indrindra amin'ny mpizaha tany sy ny mponina. Misy olona foana matetika eto. Ny fatiantoka dia ny fisian'ny fanofaanana soavaly, mamorona fofona mahafinaritra.
Ny faritra atsimon'i Hua Hin City Beach dia azo antsoina hoe ny tena mahavariana; Any akaikin'i Takiab no misy azy, ary feno makiazy. Ny gidro dia misambotra ny tora-pasika, na izany aza, milamina amin'ny fialan-tsasatra izy ireo raha tsy voakasiky ny tenany.
Ny faritra rehetra amin'ity torapasika ity dia tsara ho an'ny milomano sy ny fiposahan'ny masoandro. Ary manerana ny faritaniny dia misy trano fandraisam-bahiny sy condominiums ampy. Mahazo miditra amin'ny City Beach ianao na aiza na aiza ao an-tanàna amin'ny alàlan'ny tuk-tuk.
Ity morontsiraka ity dia eo akaikin'ny Takiab ihany koa (fa amin'ny lafiny mifanohitra amin'ny Beach Beach), fa ny macaque dia tsy hita eto. Takiyu Beach dia mitovy amin'ny tsena atsinanana - mitabataba izy, samy hafa habe, tsy misy sisin-tany mazava, ary somary milamina.
Ny morontsiraka dia rakotra zavamaniry, misy toerana manofa lakana, lakana sy soavaly. Lehibe lavitra noho ny tanàna ity tora-pasika ity, eto ianao afaka milalao baolina, maka dia an-tongotra, miala sasatra amin'ny talaky ny masoandro, miditra amin'ny fanjonoana amin'ny foza amin'ny vato vita amin'ny olona izay mandeha amin'ny ranomasina. Milomano eto dia tsy mety noho ny ambany miadana loatra.
Akaiky akaikin 'ny morontsirak'i Takiab dia misy condominiums, bungalow ary hotely maro. Mora kokoa noho ny alehan'ny fiara na ny bisikileta. Raha tonga amin'ny tuk-tuk ianao, dia handeha 10 minitra hafa indray.
Any amin'ny morontsiraka mitovy amin'i Takiab no misy azy eo amin'ny 1 km miala aty aoriana. Tsy feno olona io tora-pasika io, eny amoron-dranomasina ianao dia mahita casuarines maro izay miteraka alokaloka mivaingana. Ireo mpizahatany avy any USSR teo aloha dia mihevitra ity morontsiraka ity ho tsara indrindra hisaintsaina. Na izany aza, tsy dia mety loatra ny milomano eto, satria ny rano matevina dia mivelatra mandritra ny 50 m.
Xuan Son Beach dia hita ao amin'ny faritry ny sehatry ny fanatanjahantena ho an'ny miaramila, saingy ny fidirana eto dia malalaka ho an'ny rehetra. Ny olon-drehetra dia afaka manana moka ihany koa hohanina ao amin'ny efitrano fisakafoan'ny miaramila ary hampiasa ny toeram-piantsenana akaiky. Tsy maintsy mandeha fiara na bisikileta ianao eto, satria tsy mankany amin'ity torapasika ity ny fitateram-bahoaka. Azonao atao ny mijanona ao amin'ny iray amin'ireo trano fandraisam-bahiny izay mifanila amin'ny tora-pasika.
Tao Beach Tortoise morontsiraka
Any akaikin'i Xuan Son, akaikin'ny tendrombohitra Khao Tao. Niavaka izany ny sakany lehibe iray (sahabo ho 100 m), ny fihantona tam-po, ary ny tsy fisian'ny vato. Amin'ny ankapobeny, dia mitovy amin'ny Hua Hin City Beach any amin'ny toerana malaza indrindra aminy.
Ny filomanosana eto dia misy olana, satria ny rano marivo dia mivelatra amina folo metatra maromaro. Ny filentehan'ny masoandro dia tsy ahazoana aina ihany koa eto fa tsy ny morontsirak'i Hua Hin sisa. Saingy azo atao ny mirenireny akaikin'ny ranomasina, mankafy ireo sambo (akaikin'ny seranan-tsambo). Ny tombony lehibe ananan'ny torapasika Tao dia ny akaiky ny tendrombohitra tsara tarehy mitovy anarana aminy, ary koa ny Tempolin'i Turtle, izay hita eo amin'ity tendrombohitra ity. Sary tena tsara tarehy azo alaina.
Tsy sarotra ny ho tonga eto (6-7 km miala ny afovoan-tanàna), fa tsy maintsy handeha amin'ny fitaterana manokana ianao, satria tsy mandeha ny vahoaka. Milamina ny faritra eto, vitsy ny mpizaha tany.
Io dia tora-pasika kely izay hita ao amin'ny faritra atsimon'i Hua Hin, antsasaky ny adiny iray avy amin'ny faritra afovoany amin'ity tanàna ity. Maro ny mpizahatany no mihevitra azy io ho tora-pasika tsara indrindra ho an'ny fiposahan'ny masoandro sy ny milomano any amin'ireo mipetraka akaikin'i Hua Hin. Mitovitovy amin'ny morontsiraka nosy.
Sai Noi dia mety ho an'ireo izay tia fitsaharana am-pilaminana: mpivady manambady, ao anatin'izany ny be taona na manan-janaka, ary koa ny mpitovo irery. Tsy feno olona izy io, madio, feno fasika sy akorandriaka be. Mahazo aina tsara ny halalin'ny ranomasina. Ity morontsiraka ity dia bay kely eo afovoan'ny hantsana mahafinaritra, voahodidin'ny maitso. Tsy misy sakafo tsara sy fialamboly marobe, tsy toy ny moron-tanànan'i Hua Hin. Na izany aza, tsy misy olona hanelingelina ny zavaboary mahafinaritra: tsy eo ny mpivarotra. Tsy misy hotely akaiky koa. Sai Noi tsy azon'ny fitateram-bahoaka.
Tanàna kely sy tsy malaza ankehitriny izy eo amin'ireo mpizahatany avy amin'ny CIS, 25 km miala an'i Hua Hin. Ny tanjon'izy ireo mahaliana dia torapasika faran'izay lavitra, izay misy fotodrafitrasa efa velomina. Tena akaikin'ny ranomasina sy ny tora-pasika misy lalana be. Misaraka amin'ny làlana amin'ny morontsiraka maromaro ny morontsiraka. Noho izany, ny torapasik'i Cha Ama dia toy ny faritra amoron-tsiraka ao Bang Saen sy Pattaya. Sarotra eto ny milomano kanefa, azo atao ny miala sasatra amin'ny fety sy fialamboly.
Cha Ama Beach dia tsy manan-tsahala noho ny moron-dranomasin'i Hua Hin ary tsara tarehy kokoa. Manakaiky ny lalana be Ruamjit Alley izay eo amin'ny sisin-dàlana izay misy kafe sy fivarotana maro.
Puk Tien Beach Babis mainty sy Wat Na Yang (Ilay Ushastik Lehibe)
Io morontsiraka io dia somary kely sy matevina ary vatomamy. Na izany aza, misy ny masoandro. Afaka mandehandeha rano ianao manatona ny sarivongan'ny demonia na amin'ny sarivongana hafa mijoro eo amin'ireo nosy noforonin-javaboary (misy maromaro).
Milomano eto dia azo atao. Teo akaiky eo dia misy ny kafe maromaro izay fialànan'ny mponina any an-tanan'ny faran'ny herinandro.
Sai Keu amin'ny nosy Samet
Sai Keu no morontsiraka lava indrindra eto amin'ity nosy ity. Ny anarany amin'ny teny Thai dia midika hoe "fasika fotsy", satria izy no manarona an'io sombin-paradisa io. Betsaka ny hotely kely eny amoron-dranomasina, ny mpitsidika azy ireo dia afaka miditra ao anaty ranomasina rehefa avy mandao ny tokonam-baravarana. Amin'ny manodidina. Samet irery lalana. Mipetraka manandrify ny moron'ny Sai Keu izy io ary manana magazay farafahakeliny. Saingy, saika ny trano fandraisam-bahiny rehetra amoron-dranomasina dia manana trano fisakafoanana kely, izay rehefa hariva ny masoandro, rehefa hilentika ny masoandro, dia mametraka ny latabany eo ambonin'ny fasika, izay faly amin'ireo vahiny miaraka amin'ny lovia hazan-dranomasina.
Torapasika ao amin'ny Kho Nang Yuan
Ny Nosy Kho Nang Yuan dia mety ho an'ireo vao manomboka milentika sy snorkeling. Fotsy be ny fasika eto, mangarahara be ny onja. Ny hotely tokana ao amin'ity nosy ity dia antsoina hoe Nang Yuan Dive Resort. Ny bungalow-ny dia miorina ambony vatolampy.
Io no lava sy mahasoa indrindra amin'ny torapasika. Chang. Tsy lavitra ny fantsom-by. Tanàna iray manontolo no niforona teto niaraka tamin'ny fivarotana, departemantan'ny polisy, ny tranom-bako ary ny toeram-pitsaboana.
Ny ankamaroan'ny morontsirak'i Chang dia faritany amin'ny hotely. Tsy midika akory izany fa mifikitra amin'ny toerana iray. Mety ho any amin'ny faritra atsimon'ny nosy mba hiala sasatra amin'ny toerana tena mahazo aina sy be mponina, fa somary bevohitra toa an'i Klong Kloy. Eto, dia tonga akaiky ny morontsiraka ny ala tropikaly ary be dia be ny masoandro sy ny elo. Klong Kloy dia mety ho an'ny mpitia mozika, satria amin'ny fiatoana eo an-toerana ny singa mozika reggae ao an-toerana dia tsy mijanona ny mozika, ary any amin'ny toeran'ny Sambatra dia manatanteraka ny hirany ho an'ny mpitsidika ny tompony.
Ao amin'io tora-pasika io dia misy fanofaanana lakana izay ahafahanao milomano any amin'ireo nosy manodidina. Ny toerana fanofaana dia any amin'ny faritra atsimon'ny Kai Bei. Milamina ny faritra avaratra, vitsy kokoa ny olona ao, na dia misy kobanina eny anaty rano aza.
Torapasikin'ny Nosy Similan
Torapasikin'ny nosy Koh Miang
Ao amin'ity nosy ity dia misy amoron-dranomasina 2 tsara tarehy, rakotra fasika fotsy, kely ny habeny, ary rano madio dia mazava. Misy morona lehibe kokoa any avaratry Koh Miang. Rehefa avy nandalo azy teo amin'ny 1,5 km mankany amin'ny ilany atsimo ianao dia afaka miditra amin'ny torapasika kely kokoa. Ireo tora-pasika roa dia manome safidy fisakafoanana. Any an-dranomasina dia maro ny trondro sy biby samy hafa. Afaka mandeha eny Koh Miang ianao amin'ny sambo avy any Thap Lamu.
Torapasikin'ny nosy Koh Similan
Misy amoron-dranomasina misy fasika malefaka fotsy. Ireo mpikaroka dia afaka mandinika ny vatohara voaroaka saika tsy voadinika. Ireo morontsiraka ireo dia misy fidirana ranomasina mora. Ny rano dia misy loko turquoise, tena madio. Ao amin'ny Ko Similan dia misy vatolampy antsoina hoe Sail miaraka amina fehezana fijerena eo an-tampony. Misy lalan-dàlana ao amin'ny nosy izay mampitsangatsangana ny ala any anaty ala. Ny toerana filokana amin'ny valan-jaza tena malaza dia ny Fantasy Reef ary Elephant Head Rock.